Arụ Ọrụ Mba Ọzọ 🥇 【Chọta ma tinye akwụkwọ maka ohere ọrụ na UAE】
Abrụ Ọrụ Mba Ọzọ Dubai - Chọta ma tinye akwụkwọ maka ezumike na UAE
Ọrụ ahịa na Dubai
bipụtara Ụlọ ọrụ Dubai City at January 20, 2018
Na-arụ ọrụ ná mba ọzọ na Dubai
Na-elebara ndị na-achọ Job anya!
Workrụ Ọrụ ná Mba Ọzọ Dubai na Dubai City Companylọ ọrụ. Ntị ọhụrụ ndị na-achọ Job si gburugburu ụwa. Anyị na-enye aka maka ịchọrọ ọrụ ndị ọrụ na UAE. Ọ bụrụ n’ị na-achọ ka e goro gị ọrụ na Dubai. Anyị nọ ebe a iji nyere gị aka ịchọta ọrụ na UAE. Anyị na na-enyere aka inweta ọrụ na Dubai. Ihe niile ị ga - eme bụ ilele ọrụ anyị maka ọrụ ọrụ.
Ndị ọrụ anyị na-akwụ ụgwọ maka ọtụtụ ọrụ na UAE. Ọrụ mba Dubai, nke a bụ ihe onye ọ bụla chọrọ na anyị bụ ebe a iji nyere gị aka ịchọta ọrụ na Dubai City. Onye dinta ọ bụla na-ahụ maka ọrụ mba niile nwere ohere ịrụ ọrụ na Dubai. Citylọ ọrụ Dubai City na-enyere aka ịchọta ọrụ kachasị mma na Dubai na Abu Dhabi. Mana tupu ị kwafeta n'isi obodo United Arab Emirates. Biko gaa na anyị ndu maka ndi choro oru. Ị ga-achọ ịnweta ụfọdụ ozi n'aka iji nweta ọrụ na Dubai.
Anyị na-achọ ndị pụrụ iche ndị nwere ike ịrụ ọrụ maka anyị. Anyị na-ele anya mgbe nile maka ndị na-egbuke egbuke, ndị nwere nkà na ndị nwere obi ụtọ. Ị bụ achọ ọrụ na Dubai?. Anyị na-akwụ ụgwọ maka ọtụtụ ọnọdụ na Dubai. N'otu oge ahụ, Ohere na ọrụ na Dubai City na-emeghere gị. N'iburu nke a n'uche, anyị bụ ụlọ ọrụ Dubai City na dịka ihe atụ. Anyị bụ ụlọ ọrụ nchịkwa na-eduga na ebe ọrụ na UAE. Anyị na-achọ ndị na-achọ ọrụ. Na-arụ ọrụ ná mba ọzọ n'enweghị ahụmahụ. Nke ahụ abụghị ihe iseokwu.
Bulite Resume maka ọrụ mba ọzọ na UAE
N'ikwu okwu n'ozuzu, anyị nwere mmasị ịtọ gị maka ọrụ ọhụrụ na Dubai!
Citylọ ọrụ Dubai City na-enye ọrụ ndụmọdụ. Mmemme nyocha ọrụ anyị ụzọ ahia onwe gị na Dubai. Bụrụ ụzọ ọhụrụ maka ndị ọpụpụ na UAE. Ọ bụrụ na ị si mba ọzọ ma na-atụ anya ịchọta ọrụ. Ụlọ ọrụ anyị bụ maka gị. Dị ka ihe bụ eziokwu, ụlọ ọrụ Emirates na-agbago gburugburu Middle East. Anyị bụkwa otu n'ime ndị ọrụ kachasị mma maka a ọrụ Dubai na Abu Dhabi.
Na-arụ ọrụ ná mba ọzọ na Dubai maka Expats
Ebe kachasị mma maka ọrụ na Middle East na Dubai. Dị ka eziokwu ma ọ bụrụ na ị gaghị hị ga-ahụ Ọrụ Mba na Ụlọ Ahịa Njikwa UAE. Companylọ ọrụ anyị nwere ike inyere gị aka chọta ọrụ n'ime ụbọchị 60. Ọ bụ ezie na nke a nwere ike ịbụ ibugharị ezi ịmalite. Na ụlọ ọrụ anyị dị ka onye otu na-akwụ ụgwọ ga-enweta gị na bọọdụ maka ndị were n'ọrụ Middle East.
Na-arụ ọrụ ná mba ọzọ na Dubai - Anyị na-akwụ ụgwọ na Dubai City!
Send Resume maka Ọrụ na Dubai
Biko Dee anyị ebe nrụọrụ weebụ iji nyere ndị ọzọ aka!
Jikọọ anyị Anyị bụ Hiring na Dubai!
Anyị na-echere usoro ntụrụndụ gị maka Na-arụ ọrụ ná mba ọzọ na Dubai. Anyị ga ịhụnanya inyere gị aka inweta ọrụ na UAE. Agbanyeghị, anyị enweghị ike ịmanye ụlọ ọrụ ndị ọzọ inye gị nrọ ọrụ. Mana ọ bụrụ na anyị ga - enyere gị aka, anyị ga - emere gị ya. Ebumnuche anyị maka ndị na-achọ ọrụ zuru ụwa ọnụ bụ n'anya Dubai. Ọkachamara ndị ọrụ ịnabata ọrụ ga - enyere gị aka maka nke a. Karịsịa ma ọ bụrụ na ị bụ onye na-achọ ọrụ India. Ụlọ ọrụ Dubai ga-atụ anya ịnye gị ụgwọ.
Maka nzube nke inyere gị aka. Ọ bụrụ na anyị ga-enwe ohere ka ndị na-akpọ ọrụ were gị ụgwọ. Ndị ọrụ ọrụ anyị ga-eme nke ahụ n'ezie. Ụlọ ọrụ Dubai City bụ naanị iji nyere gị aka inweta akwụkwọ. Ụlọ ọrụ anyị na-arụ ọrụ na-enyere ọtụtụ ndị na-achọ ọrụ aka ịchọta Ọrụ n'èzí Dubai. Karịsịa ma ọ bụrụ na ị si South Africa. Ọbụna Ndị ọrụ na-achọ Pakistani na-achọta ọrụ n'aka anyị.
Banyere ụbọchị 60 Na-arụ ọrụ ná mba ọzọ na Dubai - nke a bụ oge anyị chọrọ iji nye gị ohere ọrụ na Dubai. Iji tinye ya n'ụzọ ọzọ, ọrụ ịchọ ọrụ bụ usoro ogologo - Ee, ọ bụ eziokwu na ị ga-elekwasị anya na Linkedin na ndị ọzọ saịtị ọrụ. Dị mkpa iji ghọta na ị na-agbalị ịbanye na ndị ọrụ nchịkwa na ndị ọrụ nchịkwa ọzọ. Gaa na LinkedIn ma gbalịa bulite faịlụ njikọ na ugboro ugboro. Ruo mgbe ị ga - abịakwute ndị niile na - akpọbata na Dubai. Nke a bụ naanị ụzọ maka ugbu a na ọrụ gị anyị nwere ike inyere gị aka.
Anyị na-akwụ ụgwọ ndị mba ọzọ maka Emirates Jobs na Dubai
Ị na-achọ ọrụ na Dubai ?. Mụ na ụlọ ọrụ anyị, ị nwere ike ịchọta ọrụ ngwa ngwa. Ndị ọrụ anyị na-ahụ maka ebe a bụ enyere gị aka ịchọta ọrụ dị ịtụnanya na Abu Dhabi, dika anyi no Ụlọ ọrụ Dubai City na-achọ ọrụ bụ ọbara anyị. N'ebe dị mma n'ịchọta ọrụ na Emirates na Dubai City Company dị mfe. Na nyocha ikpeazụ, pịa foto dị n'okpuru ma kọntaktị Emirates ụlọ ọrụ.
Ọrụ n'èzí Dubai n'ihi na Ọbara nwere ike ịbụ gị!
Ọrụ na Emirates - Ị nwere ike nweta ọrụ na Emirates. Ị bụ achọ ọrụ dị ịtụnanya na Dubai?. Dịka eziokwu, onye ọ bụla nọ na Dubai Ịchọ ihe dị ịtụnanya site na ụbọchị otu mgbe ha na-ala. Ya mere, anyị nọ ebe a iji nyere gị aka nyocha ọrụ gị. Otu n'ime ụlọ ọrụ ndị ị ga-atụle na ọrụ gị bụ Emirates. Ọbụna ụlọ ahịa Emirates, n'ezie, ị nwere ike ịpị ya chọta ọrụ ọrụ na ha na UAE.
Anyị na-anata ndị ọrụ ọrụ maka ọrụ na Dubai
Ị na-achọ a ọrụ Dubai?. N'oge dị ugbu a, ịnwere ike ịchọta ọrụ na kọfị Starbucks. N'ikwu ya n'ụzọ ọzọ, anyị bụ ịhụnanya inyere ọbụna anyị aka Ebe nrụọrụ weebụ Emirates na Ọwara. Olileanya na ịchọrọ ịrụ ọrụ maka ụlọ ọrụ Emirates. Maka ịchọta ọrụ dị ịtụnanya na Dubai ma ọ bụ Abu Dhabi.
Ụlọ ọrụ Dubai City na-achọ ndị ọhụrụ ịbanye n'òtù ọrụ na Gulf. Ebe ndozi maka ọrụ Emirates nọ n’ọbara Arabic anyị. Ekwela oge gị ma chọta ọrụ n'aka anyị. Ọ bụrụ na ị na-achọ Ọrụ Gulf can nwekwara ike izipu Resume na ụlọ ọrụ anyị. A na-ahụ maka Ọrụ Mba Ọzọ Dubai maka njem.
Enwere ọtụtụ nhọrọ maka ndị na-achọ ọrụ n'ụwa na UAE. Anyị na-egosi ndị na-achọ ọrụ esi achọta ọrụ na Dubai. Anyị nọ ebe a iji nyere gị aka ịbụ onye mgba United Arab Emirates. Citylọ ọrụ Dubai City na-enyere ndị njem ọhụụ si India na Pakistan aka ịchọta ọrụ.
Anyị na-achọ nwanyị na-agafe na UAE
Ị ga-achọ ịrụ ọrụ na BP? N'ihi nke a, anyị na-emelite ebe ọrụ anyị ugboro ugboro. Anyị na-echere maka ndị inyom ọhụụ ọhụrụ na ndị na-aga obodo ọzọ. Iji gosi na anyị na-achọ South Africa, yana Indian ndị si mba ọzọ na-achọ ịmalite ọrụ na Dubai. Anyị na ụlọ ọrụ anyị, onye ọ bụla nwere ohere ịrụ ọrụ na British Petroleum. Naanị ihe ị ga - eme bụ izitere anyị CV. A na-enye Adreesị Email n'elu nke ibe.
United Arab Emirates bụ otu n'ime ihe kachasị mma maka ndị inyom na-esi mba. N'agbanyeghi ihe nwa nwanyi bi na ya bu, Dubai na Abu Dhabi na-enye oru. Karịsịa A na-eme obodo dị na Dubai City maka ụmụ nwanyị. N'oge a bu uzo kacha ewu ewu maka ndi isi oru nwanyi. Bụ ọrụ na họtel na Dubai ị nwere ike ịchọta ọrụ n'ọtụtụ ọnọdụ. Site na ọrụ bụ isi dịka odibo rue ụlọ nkwari akụ ndị isi manager oghere.
Ndị na-achọ ọrụ ọhụrụ amalite iji mobile na Dubai
Ọgbọ ọhụrụ nke ịchọ ọrụ na Ọrụ Abroad Dubai abiawo. Ị nwere ike chọta ọrụ na mobile na United Arab Emirates. Ugbu a na ekwentị mkpanaka, ị nwere ike ịme ihe niile. Dịka ọmụmaatụ, ịnwere ike iji android chọta ịchọta ụzọ ọrụ ọhụrụ. Bido ziga CV niile na UAE site na iji otu Pịa. Ọzọkwa, ị nwere ike ugbu a soro Dubai. Maka ndị na-achọ ọrụ ọhụrụ na Dubai. Ekwentị mkpanaka bụ otu ngwaọrụ kachasị mma iji mee.
Ugbu a ọbụna Google na-akwụ ụgwọ maka ngwa ekwentị mkpanaaka. N'iburu nke a n'uche gị, ị ga-atụle ahịa ahịa na ekwentị mkpanaaka. Dịka ọmụmaatụ, ị nwere ike ịgwa ndị ọrụ nnọchiteanya dị iche iche okwu. Ụlọ ọrụ anyị kwukwara ọtụtụ ọrụ. Dịka ọmụmaatụ otu n'ime ha bụ Blog blog na Gulf Region. Ihe niile ị ga - eme bụ isonyere ndị otu anyị ma kwupụta CV gị emelitere.
Na-arụ ọrụ ná mba ọzọ maka Dubai.
Anyị na-akwụ ụgwọ maka ụgbọala na Middle East
N'aka nke ọzọ, ọ bụrụ na ị na-achọ ọrụ ịkwọ ụgbọala Dubai anyị nwere ike inyere gị aka. N'ihi nke a, anyị mere ka ibe a. Dị ka egosiri n'elu, ndị otu anyị na-emelite ọhụụ ọrụ ọhụrụ. Ndị ụlọ ọrụ Dubai na-echere ndị na-aga ime mba ọhụrụ. Maka ọtụtụ akụkụ, anyị bụ ugbu a na-enyocha Audi na Middle East.
Dị ka ọ dị mkpa, ọ bụrụ na ị nwere ahụmahụ site na India ma ọ bụ South Africa ị nabatara karịa. N'aka nke ọzọ, ndị ọhụrụ anyị na-achọ ịmalite ọrụ na Dubai. O doro anya na ị nwere ike itinye ya n'ọrụ. Biko zigakwara akwụkwọ ozi mkpuchi anyị na ụlọ ọrụ anyị.
Ụbọchị ndị a ọ bụla onye ọ bụla na-esite na ya nwere ohere ịrụ ọrụ ná mba ọzọ na Dubai na chọta ma tinye maka ohere ọrụ na UAE. A na - akpọ onye ọ bụla ka ọ kwalite mmalite ahụ. Ị nwetụla ohere ị rụọ ọrụ na Ụlọ Ọrụ Akaụntụ? Biko ziteghachi na ndị ọrụ nchịkwa anyị. Anyị na-enwekwa ohere ndị ọzọ na-arụ ọrụ maka ndị na-achọ ọrụ n'ụwa.
Na-arụ ọrụ ná mba ọzọ na Dubai na mmanụ ala
Naanị maka Ndị Nchọgharị Ọchụchọ Mba Nile
Ị nwere ike ịchọta ọrụ na Dubai na Ụlọ Mmanụ na Gas. Akụkụ a bụ oke mmepe azụmahịa na UAE. Iji maa atụ, inwere ike ịmalite ịrụ ọrụ na mba ofesi na Dubai na Abu Dhabi. Karịsịa ụlọ ọrụ dị na Abu Dhabi na-akwụ ndị na-achọ Qatar ụlọ ọrụ mmanụ na Qatar na Abu Dhabi ụlọ ọrụ. N'aka nke ọzọ, ebe kachasị ewu ewu chọta ụlọ ọrụ na-arụ ọrụ bụ Saudi Arabia. Ndị si mba ofesi na ndị na-achọ ọrụ sitere n'ụwa niile hụrụ nke a n'anya ebe.
Echiche nke ọzọ ịchọta ọrụ bụ ịga ije na nyocha na Dubai. Ọ bụ otu n'ime ụzọ kacha mma ị ga-esi jikọọ na steepụ n'ime UAE. Site na ịchọta nke kachasị mma Dubai City Companies. Ndị na-achọ ọrụ ka ị ga-elele anya n'ihi ọtụtụ ndị ụlọ ọrụ Middle East. Ugbu a, anyị na-enyere aka inweta ọrụ na ụlọ ọrụ Qatar Petroleum, Dubai na Abu Dhabi. Ebumnuche anyị bụ ijikọta gị na ndị ọrụ.
Ọrụ na Dubai maka Filipino Expats
Ụlọ ọrụ Dubai City na-enyekwa aka na ọnọdụ ọrụ na UAE. Ọ bụrụ na ị na-achọ ka ndị ọrụ ụlọ ọrụ Dubai kwụrụ gị ụgwọ. Anyị nọ ebe a iji nyere gị aka. N'ikpeazụ, mgbe ị sonyere ụlọ ọrụ anyị ị nwere ike ịchọta ọrụ ọhụrụ na Dubai. Anyị na-akwụ ụgwọ maka ọtụtụ ọrụ na UAE. Ị nwere ike ọrụ mba dị na Dubai dị ka Filipino na Dubai ha na-akwụ ụgwọ.
Nke a mere ndị mbịambịa nọ na Dubai ji akwaga. Companylọ ọrụ ndị na-ewe ndị ọrụ na UAE na-enyere aka Filipino expats. N’ezie, nyere gị aka ịchọta ọrụ na Dubai City dị ka onye ọrụ Filipino. Onye ọ bụla na-achọ ọrụ mba ụwa, na nchịkọta, nwere ohere nke ya ịrụ ọrụ na Dubai. Dịka ọmụmaatụ, anyị dị ugbu a ụgwọ maka ọrụ nkụzi na Dubai. Maka na Middle East ọ bụ ọtụtụ ohere maka ndị ọpụpụ ọhụrụ.
N'ezie, anyị na-echere maka ndị na-aga n'ihu na agụmakwụkwọ MBA. N'ihi na Dubai ọ bara oké uru. Onye akwukwo akwukwo di elu anyi nwere. Nke a ga-adịrị anyị mfe itinye ha.
Ọrụ Ọrụ Nchọpụta Job na Dubai?
Ihe ka ukwuu na-egosi na Dubai bụ ihe kacha mma bụ ụgwọ ọrụ dị elu maka ndị na-ere ahịa. Echegbula onwe gị banyere CV biko zipụ anyị taa. Ndị otu anyị ga-enyere gị aka ịmalite achọ ọrụ na-egosi n'ụzọ doro anya na Emirates. N'ụzọ dị ịtụnanya a ga-enye ya na 60 Days. Anyị na-enyere ọtụtụ mba dị iche iche aka ịbanye na UAE.
N'ikpeazụ, anyị bụ nanị ụzọ maka nyocha ọrụ gị na UAE dịka onye na-achọ ọrụ India. Kedu ihe mere anyị ji enye 60 ụbọchị ?. Anyị ga-egosi gị ụzọ ịchọta ọrụ. Anyị na-enwe ike ijikọ gị na ndị ọrụ ọrụ. Dika edere ya na ichere maka mmetuta njikọ ga abia. Na-aghọ onye ọrụ obi ụtọ nke ọpụpụ na Dubai.
Anyị bụ naanị ụlọ ọrụ dị n'ahịa ndị na-adịghị emejọ ndị na-achọ ọrụ. Naanị anyị chọrọ inyere ndị mmadụ aka inweta ọrụ nrọ na Dubai. Mana na anyị anaghị enyere onye ahụ aka. Anyị na-eziga ego gị na akaụntụ gị. N'ikwu okwu n'ozuzu, otu anyị na-enyere gị aka na Ọrụ Abroad Dubai.
Ònye, Gịnị, Ntak, Mgbe, Ebee?
Dubai Dị ka Ebe Ọhụụ - Ihe Niile I Kwesịrị Ịmara
Dubai, obodo nke abụọ United Arab Emirates (UAE) n'ihe gbasara oke, Dubai, bụ isi obodo maka akụ na ụba ụwa. Ọtụtụ ndị mmadụ na-atụ anya ịchọ ọrụ na mpaghara tumadi maka uru ha nwere ike inweta ebe a gụnyere ezigbo ụgwọ ọrụ, ọdịbendị ọrụ buru ibu, ibi ndụ okomoko, ego anaghị akwụ ụtụ isi na ọmarịcha ala ya. Ọ bụ otu n'ime steeti ndị na-emesapụ aka mara maka ọnụego ya na-aga n'ihu. Ọ ga-ekwe omume maka ndị nwe obodo nwere ala nke Dubai, n'adịghị ka mba ndị ọzọ na Middle East. Nke ahụ na-eme ka ọ bụrụ otu nhọrọ kachasị elu maka ndị na-achọ ọrụ si n'akụkụ ụwa niile ịchọ ọrụ na mpaghara a.
Ndị dị iche iche nke ọrụ na Dubai
Ọtụtụ mba na-eme nke ọma na Middle East na-adabere nanị na mmanụ dị ka ihe bụ isi maka akụnụba ha. Mana ihe maka Dubai dị iche. Ọtụtụ ndị ọzọ ụlọ ọrụ na-emepe emepe ugbu a na Dubai, na-adọta ndị na-achọ ọrụ si India, Pakistan, Bangladesh na ọtụtụ akụkụ ndị ọzọ nke Eshia ịrụ ọrụ na ngalaba ndị na-eto eto. Mainlọ ọrụ ndị bụ isi na-abụghị mmanụ na gas na-eto ugbu a na Dubai gụnyere njem, ihe owuwu, ọrụ ego na ezigbo ụlọ n'etiti ọtụtụ ndị ọzọ.
Akwụ ụgwọ na uru ndị ọzọ
Salagwọ ọnwa na akụrụngwa nke ego anaghị akwụ ụtụ isi na-eme ka Dubai bụrụ ndị kachasị nhọrọ maka expats ịhọrọ Dubai dị ka otu n'ime ebe kachasị aga nke ọma iji rụọ ọrụ. Iji bụrụ onye eziokwu, Dubai bụ otu n'ime mba kachasị akwụ ụgwọ n'etiti mpaghara ndị ọzọ niile nke UAE. Riesgwọ ọnwa nwere ike dị otu ebe gburugburu AED 75,000 maka otu ọnwa maka ndị isi njikwa teknụzụ ma ọ bụ ndị na-ahụ maka ịgbatị ihe na-arụ ọrụ na njikwa, mmanụ na gas. Onye isi n ’ụlọ ọrụ na-ewu ụlọ nwere ike inye akpa gburugburu AED 80,000 kwa ọnwa. Mana usoro mmalite maka ụgwọ ego maka ndị njikwa na injinia nwere ike ịdị n'etiti ebe ọ bụla n'etiti AED 12,000 ruo AED 15,000 kwa ọnwa. Onwere otutu ihe banyere nke ụgwọ ọnwa kwa ọnwa nke ndị na-achọ ọrụ nwere ike ịdabere. Ndị kachasị ewu ewu gụnyere:
Ọtụtụ n'ime ọrụ na-akwụ ụgwọ nnukwu ụgwọ maka ọrụ ahụ na-esonyere ọtụtụ ọnyà ndị ọzọ dịka ebe obibi n'efu, akwụkwọ ego maka ekwe ntị, ụgbọala na otu tiketi gburugburu afọ ọ bụla n'etiti ọtụtụ ndị ọzọ.
Ọ bụ ezie na ngwugwu ụgwọ nwere ike ịmasị mma maka ọrụ niile dị na mpaghara ahụ, ọ na-abịa mgbe ọ na-akwụ ụgwọ ndị ọzọ. Ọnụ ego nke ndụ dịkwa elu ma ọ dị mkpa ka ndị na-achọ ọrụ were ya na akaụntụ. Ọ ga-ewe ihe dịka AED 9000 kwa ọnwa maka ịgbazite ụlọ obibi ụlọ 2 e nyere ya. Ọnụahịa dị oke elu maka ndị na-enweghị ebe obibi, nke dị gburugburu AED 7000 maka ụlọ ụlọ ime ụlọ 2. O kwere omume inwe ụlọ n'ime ọtụtụ ụlọ ndị a na-edekọ na-ewuli obodo ahụ gburugburu AED 2000.
Site belata ọnụahịa mmanụ ụgbọ ala na ndozi ụgbọ ala, ọ bụ nnukwu nhọrọ iji zụta ụgbọ maka njem. Nhọrọ nke ịnwe ụgbọ ala kwa ọnwa dị n'akụkụ AED 1500 maka obere ụgbọ ala hatchback. Ọ bụ ezie na ndị tagzi nwere ike ịgba ụgwọ gburugburu AED 2 n'otu kilomita, ndị mmadụ n'otu n'otu nwere ike ịnya ụgbọ ala etiti obodo na ihe dị ka otu maka njem ahụ.
Ịkụzi akwụkwọ agụmakwụkwọ
Ọ bụ ihe ọzọ ihe dị mkpa ịtụle maka ụmụaka. Ọ bụ ezie na ndị mmadụ n'otu n'otu ga-etinye oge ka ukwuu n'ọrụ ha na-arụsi ọrụ ike iji kpokọta AED ọ bụla, enweghị ụlọ akwụkwọ gọọmentị ga-ewepụta ụmụaka maka agụmakwụkwọ. Ọ dị ka usoro nke gọọmentị Dubai State. Nke a na - eme ụlọ akwụkwọ nkeonwe na mba ụwa naanị otu nhọrọ maka expats na - atụgharị maka agụmakwụkwọ nke ngalaba ha. Mana ego a na-akwụ na nkuzi na ụgwọ dị oke elu, na-agbadata gburugburu AED 90,000 kwa afọ, ọkachasị maka ụlọ akwụkwọ mba ụwa na-eduga na mpaghara maka ngalaba mkpochapụ.
Dịka mba ọ bụla Muslim, otu izu ọrụ na Dubai na-abịa site na Sunday ruo Tọzdee n'ọtụtụ ụlọ ọrụ. Maka ụfọdụ ụlọ ahịa ahịa na ụlọ ahịa ndị ọzọ, izu ụka na-abịa site na Satọdee ruo Tọzdee, Friday (ụbọchị nsọ nke ndị Alakụba) na-adị kwa izu dịka mba ọ bụla ọzọ Muslim. A na-amarakwa oge awa ọrụ dị iche iche site na ụlọ ọrụ na ụlọ ọrụ. Oge ahia na-esite na 8 AM n'ụtụtụ gaa 1 AM n'ehihie na-esochi ezumike atọ. Mgbe ahụ, ọrụ ga-amalite na 4 PM ma na-aga n'ihu maka awa 3 ọzọ ruo 7 PM. Ọ dịkwa mgbanwe maka òtù azụmahịa nke ụwa na-arụ ọrụ n'oge 9 AM na 6 PM E nwere mbelata oge ọrụ n'oge ọnwa nke Ramadan.
Ndị na-achọ ọrụ nwere ike ịgakwuru ọtụtụ ọrụ ntanetị na ụlọ ọrụ na-ewe ndị ọrụ iji chọọ ohere ha nwere. Ha nwekwara ike iji webụsaịtị ụlọ ọrụ maka ịmatakwu gbasara ụdị yana ohere. Nhọrọ ọzọ nwere ike ịbụ ka ndị enyi, ndị enyi mara gị ma ọ bụ ịkpọ oku oyi iji nweta ụfọdụ na - eduga gị.
Atụmatụ maka inweta Job na UAE
Ndị mmadụ na-aga UAE maka ihe dị iche iche, nke kachasị mkpa, maka ịchụ nta ọrụ. UAE bụ otu n'ime ebe kachasị dị mkpa maka azụmahịa na njem. Mpaghara a etoputala ngwa ngwa n'ihi ọnọdụ ya na usoro nchịkwa nchịkwa dị mma. Dịkwa ka mpaghara ndị ọzọ, ọrụ bụ ihe na - akpata nsogbu na ịkwaga ime obodo. Ọ bụ ezie na ọ bụ ezi mmepe na mmepe nke akụrụngwa jikọtara na ohere ọrụ, ịchọta ọrụ na UAE abụghị nkwa.
Ulo oru di iche iche mana o choro karia ogwu gi na iru eru gi. Otu esi eme ngwa, ebe ị na-etinye n'ọrụ, mgbe ị na-etinye n'ọrụ, na otu esi abịakwute onye were gị n'ọrụ bụ ihe niile na-ekpebi ịchụ nta ịchụso ọrụ. Ụfọdụ ndị nwere echiche na-ezighị ezi banyere UAE na inweta ọrụ naanị n'ihi na ha amaghị otú e si eme ya. Ụfọdụ na-enweta ọrụ na ụgwọ dị ala.
Lee ụfọdụ ndụmọdụ maka ịchọta ọrụ na UAE.
UAE bu isi mmalite; eziokwu ahụ bụ na ndị na-etinye ego na-enuba n'ihi mmụba nke mpaghara a; enwere otutu ohere inweta oru. Agbanyeghị, ọ nweghị ihe doro anya gbasara inweta ọrụ na mba Arab. Ga-amatarịrị ụdị ụdị nkà na ahụmịhe puru iche achọrọ na ike dị iche iche. Ọzọkwa, ịkwesịrị ịma ọkwa nke amamịghe nke ụlọ ọrụ dị iche iche chọrọ.
N'ezie, ị chọrọ nkà dị mkpa iji nweta ọrụ ọ bụla n'ụwa. Na UAE, ọ karịrị ihe achọrọ. Ọ bụrụ n’ịchọrọ ọrụ kwesịrị ekwesị na ụlọ ọrụ ama ama, ịkwesịrị inweta nkà kwesịrị ekwesị. Ogologo oge, ndị ọrụ Eshia na-achọsi ike; Ndị bi na Asia na-emechichara mpaghara ahụ dum, ka oge na-aga, ọchịchọ a na-achọ ndị a ga-achọ irulatala. Ọzọkwa, ikike ịre ahia nke ndị were ọrụ na UAE dị elu; njirimara ndị a dị mkpa nke ụlọ ọrụ ụwa na mba Arab.
Nnyocha dị oké mkpa. N'ezie, ị ga-eme ngwa gị ma kwadebe akwụkwọ ndị dị mkpa kwa ọnwa na nleta ị chọrọ. Imirikiti ụlọ ọrụ dị n'ógbè ahụ ga-edozi gị na oge nyocha 3 izu. Ị ga-adị njikere maka ọnọdụ ndị dị otú ahụ. Mee ihe omume ụlọ akwụkwọ gị nke ọma.
Chọta usoro kwesịrị ekwesị kwesịrị ekwesị
Itinye akwụkwọ maka ọrụ na UAE nwere ike ọ gaghị amasị gị ịnọ na obodo gị. Ofzọ itinye akwụkwọ maka ọrụ ebe a kapịrị ọnụ. Ezipụ otu CV nwere ike ghara ime ka ị bịaruo usoro ajụjụ ọnụ. N'ezie, ịkwesịrị itinye akwụkwọ maka ọrụ dị iche iche ma jide n'aka na ị ga-etinye leta mkpuchi. Oge ọ bụla tupu izipu CV na akwụkwọ ozi mkpuchi, ị kwesịrị ịtụle CV ọ bụla nke ọma.
N’adịghị ka CV ndị ọzọ, ịkwesịrị ịnye nkọwa nke VISA gị. Startbọchị mmalite na ngafe bụ mmachi. Ndị ọkachamara si mba ọzọ na-ahụ mba dị iche iche n'ihi ya, anya na-ahụ maka ndị were ha n'ọrụ na nkọwapụta dị otú ahụ maka nkwenye nke ndị mmadụ na-azụ ahịa ha. O doro anya, ikwesiri igosipụta nkà ndị kwekọrọ n'ọrụ ị na-achọ. Na mgbakwunye, a na-atụ anya ka ị na-etinye ntinye aka na CV ma ọ bụ akwụkwọ ozi mkpuchi ya, ọ na-ewelite ntụkwasị obi nke onye were gị n'ọrụ, yabụ ohere dị ukwuu na ị ga - enweta. Maka ohere kachasị mma, tinye n'ọrụ niile dị na aka ọrụ gị.
Enweghị ike ileghara mmetụta nke mgbasa ozi mmekọrịta. UAE dị ka akụ na ụba na-eto ngwa ngwa enwetala mgbanwe n'ihi teknụzụ. Internetntanetị emetụtaghị ụlọ ọrụ azụmahịa kamakwa ụwa ụlọ ọrụ. Ndị were n'ọrụ ji nwayọ na-anakwere ikpo okwu dị n'ịntanetị maka ajụjụ ọnụ. N'ezie, ọtụtụ ụlọ ọrụ ga-achọ ka ịmechaa mpempe akwụkwọ ntanetị, itinye CV gị, ma chere maka nkwukọrịta.
Ọ bụrụ na ị na-eche itinye akwụkwọ maka ọrụ na UAE, ị kwesịrị ịmalite site na inyocha profaịlụ mgbasa ozi mmekọrịta gị. Ọ kwesịrị ịbụ ọkachamara; zere onyonyo na eserese nke nwere ike imebi ikwesị ntụkwasị obi gị. Onye were gị n'ọrụ nwere ike ịkwụsị ntụkwasị obi gị ngwa ngwa ma ọ bụ nwee echiche na-adịghị mma n'ihi ọdịdị nke posts na profaịlụ mgbasa ozi mmekọrịta gị.
Ọzọkwa, ndị na-ewe mmadụ n'ọrụ na-akwụ ụgwọ site na profaịlụ mgbasa ozi mmekọrịta dị ka LinkedIn. Kwesiri ịhazi profaịlụ gị ka ọ daba n’ihe ndị ịchọrọ n’ọrụ na atụmanya gị. Na profaịlụ gị, jiri ọdịnaya gị akọwapụtara akọwapụtara ọdịnaya gị nke ọma. Ndị were n'ọrụ na-etinye oge na mgbasa ozi na-elekọta mmadụ n'oge usoro mbanye ka inwale nka na ikike nke ndi n’oru ndi oru. E kwesịrị iwepụ posts ọ bụla na-enweghị isi ma na-atọ ụtọ nke nwere ike imebi ihe oyiyi gị.
Ụdị zuru ezu na weebụsaịtị
Imirikiti ụlọ ọrụ dị na UAE chọrọ ka ị jupụta nkọwa ndị dị na weebụsaịtị dị iche iche. Ọtụtụ n'ime nkọwa ndị ahụ dị ka ihe adịghị mkpa ma na-agwụ ike, ekwela ka ihe ndị a dọpụ gị. Companieslọ ọrụ ndị ahụ nwere ike ọ gaghị achọsi ike ịwelite ụdị ndị ahụ ka o kwekọọ na mkpa mbanye dị iche iche nke pụtara na ha tụrụ anya ka ị nye nkọwa niile. Ọ nwere ike iwe iwe ikwugharị ụfọdụ nkọwa mana Ikwesiri ime ya ma oburu na inweta oru na UAE.
Gbaa mbọ hụ na ị na-agbaso atụmatụ 4 ndị a iji nweta ezigbo ọrụ na UAE.
Ala nke abụọ nke United Arab Emirates (UAE) n'ihe gbasara oke, Dubai, bụ isi obodo maka akụ na ụba ụwa. Ọtụtụ ndị mmadụ na-atụ anya ịchọ ọrụ na mpaghara tumadi maka uru ha nwere ike inweta ebe a gụnyere ezigbo ụgwọ-ọrụ, ọdịbendị ọrụ buru ibu, ibi ndụ okomoko, ego anaghị akwụ ụtụ isi na ọmarịcha ala ya. Ọ bụ otu n'ime steeti ndị na-emesapụ aka mara maka ọnụego ya na-aga n'ihu. Ọ ga-ekwe omume maka ndị nwe obodo nwere ala nke Dubai, n'adịghị ka mba ndị ọzọ na Middle East. Nke ahụ na-eme ya otu nhọrọ kachasị elu maka ndị na-achọ ọrụ si n'akụkụ ụwa niile ịchọ ọrụ na mpaghara a.
Ọtụtụ mba na-eme nke ọma na Middle East na-adabere nanị na mmanụ dị ka ihe bụ isi maka akụnụba ha. Mana ihe maka Dubai dị iche. Ọtụtụ ụlọ ọrụ ndị ọzọ na-emepe emepe ugbu a na Dubai, na-adọta ndị na-achọ ọrụ na Poland, India, Pakistan, Bangladesh na ọtụtụ akụkụ ndị ọzọ nke Eshia na-arụ ọrụ na mpaghara na-abawanye. Mainlọ ọrụ ndị bụ isi na-abụghị mmanụ na gas na-eto ugbu a na Dubai gụnyere njem, ihe owuwu, ọrụ ego na ezigbo ụlọ n'etiti ọtụtụ ndị ọzọ.
Riesgwọ ọnwa na akụrụngwa nke ego anaghị akwụ ụtụ isi na-eme ka Dubai bụrụ otu n'ime nhọrọ kachasị maka expats iji họrọ Dubai dịka otu n'ime ebe ịga nke ọma maka ọrụ. Ikwu eziokwu Dubai bụ otu n'ime steeti kachasị akwụ ụgwọ n'etiti akụkụ ndị ọzọ niile nke UAE. Riesgwọ ọnwa nwere ike dị otu ebe gburugburu AED 75,000 maka otu ọnwa maka ndị isi njikwa teknụzụ ma ọ bụ ndị na-ahụ maka ịgbatị ihe na-arụ ọrụ na njikwa, mmanụ na gas. Onye isi n ’ụlọ ọrụ na-ewu ụlọ nwere ike inye akpa gburugburu AED 80,000 kwa ọnwa. Mana usoro mmalite maka ụgwọ ego maka ndị njikwa na injinia nwere ike ịdị n'etiti ebe ọ bụla n'etiti AED 12,000 ruo AED 15,000 kwa ọnwa. Enwere otutu ihe ndi mmadu na acho ego ndi oru n’adabere na ha. Ndị kachasị ewu ewu gụnyere:
Ọ bụ ezie na nchịkọta ego ụgwọ nwere ike ịmasị mma maka ọrụ niile dị na mpaghara, ọ na-abịakarị ụgwọ ndị ọzọ. Ulo obibi a dịkwa elu ọ dịkwa mkpa ka ndị na-achọ ọrụ chebara nke ahụ echiche. Ọ ga - ewe gburugburu AED 9000 kwa ọnwa maka ịgbazite ụlọ ndozi 2 nwere ụlọ ndozi. Ọnụ ego dị elu karịa maka ndị na - enweghị akwụkwọ, na - agbadata gburugburu AED 7000 maka ụlọ ime ụlọ 2. Ọ ga-ekwe omume ịnweta otu ọnụ ụlọ n’ọtụtụ ụlọ ndị a na-ekerịta ihe na-ewuli elu na obodo ahụ na gburugburu AED 2000.
N'iji ọnụ ala na mmanụ ụgbọ ala na-akwụ ụgwọ, ọ bụ nnukwu nhọrọ ịzụta ụgbọ ala maka njem. Nhọrọ nke ịnweta ụgbọ ala na nhazi kwa ọnwa gburugburu AED 1500 maka obere ụgbọ ala azụ. Mgbe taxis nwere ike ịgba gburugburu AED 2 kwa kilomita, ndị mmadụ n'otu n'otu nwere ike ịnye bọọdụ ụgbọ elu obodo na ihe dị ka ọnụego maka njem ahụ niile.
Ọ bụ ihe ọzọ dị mkpa ịtụle maka ụmụaka. Ọ bụ ezie na ndị mmadụ n'otu n'otu ga-etinye oge ka ukwuu n'ọrụ ha na-arụsi ọrụ ike iji kpokọta AED ọ bụla, enweghị ụlọ akwụkwọ gọọmentị ga-ewepụta ụmụaka maka agụmakwụkwọ. Ọ dị ka usoro nke gọọmentị Dubai State. Nke ahụ na-eme ụlọ akwụkwọ onwe na mba ụwa naanị otu nhọrọ maka expats ichigharịkwuru maka agụmakwụkwọ nke ngalaba ha. Mana ego a na-akwụ na nkuzi na ụgwọ dị oke elu, na-agbadata gburugburu AED 90,000 kwa afọ, ọkachasị maka ụlọ akwụkwọ mba ụwa na-eduga na mpaghara maka ngalaba mkpochapụ.
Dịka mba ndị Alakụba ọ bụla. izu na-arụ ọrụ na Dubai dịruru site na Sọnde ruo Tọzdee na ọtụtụ ụlọ ọrụ. Maka ụfọdụ ebe a na-ere ahịa na azụmaahịa ndị ọzọ, izu ọrụ na-ewe site na Satọdee rue Tọzdee, Fraịde (ụbọchị nsọ ndị Alakụba) ịbụ ngwụcha izu ahụ dịka mba Alakụba ndị ọzọ. A makwaara na oge ọrụ ndị ọrụ dịgasị iche iche na ụlọ ọrụ. Oge azụmaahịa na-abụkarị site na 8 AM n'ụtụtụ ruo 1 AM n'ehihie, ezumike awa atọ. Ọrụ ahụ ga-amaliteghachi na 4 PM ma ga-aga n'ihu maka oge 3 ọzọ ruo 7 PM Enwere mgbanwe ọzọ maka ndị otu azụmaahịa nke mba ụwa na-arụkarị ọrụ na elekere nke 9 AM ruo 6 PM enwere mbelata na oge ọrụ n'oge ọnwa nke Ramadan.
Mmasị ndị na-achọ ọrụ nwere ike ịtụgharị n'ọtụtụ ụzọ ọrụ ntanetị na ụlọ ọrụ na-ewe ndị ọrụ iji chọọ ohere dị iche iche. Ha nwekwara ike iji webụsaịtị ụlọ ọrụ maka ịmatakwu gbasara ụdị yana ohere. Nhọrọ ọzọ nwere ike ịbụ ka ndị enyi, ndị enyi mara gị ma ọ bụ ịkpọ oku oyi iji nweta ụfọdụ na - eduga gị.
Ọrụ Na Dubai - Ihe Ị Ga - ahọrọ Ma Olee Ka Họrọ?
Ọ bụ a Nrọ maka otutu ndi mmadu ibi na oru ha na steeti Dubai. Mana ọ ga - esiri gị ike inweta ezigbo ọrụ ebe ahụ ma ọ bụrụ na ndị aspirant enweghị ihe ọmụma dị mma banyere otu ihe si arụ ọrụ na UAE. Anyị ewepụtala ihe nnọchianya nke ihe ndị kacha mkpa fma ọ bụ ọrụ na ọrụ na mpaghara.
Dubai bụ otu n'ime ndị kachasị mkpa maka ndị isi 7 Emirate of United Arab Emirates (UAE). Onye isi ala, bụ onye ọchịchị kwụụrụ onwe ya na-achịkwa mpaghara a ma ama, nke dị na mpaghara ndịda Persian Gulf. A bịa na mpaghara UAE ndị bara ọgaranya, Dubai bụ otu n'ime ndị isi na ndepụta ahụ.
Industrylọ ọrụ mmanụ na-abụ akụkụ akụ na ụba mpaghara. Akụ na ụba Dubai bụ naanị n'ihi nnukwu akụ nke mmanụ sitere n'okike. Nnukwu ihe nwere gbanwere Dubai ka ọ bụrụ otu n'ime ndị na-ebute mmanụ na ahịa ụwa. Ọ bụ ezie na ọ bụrụ udiri azụ nke akụ na ụba ndị isi obodo, Dubai atụkwasịbeghị obi na ya maka uto ya. Enwere ọtụtụ mpaghara ndị ọzọ na-aba ụba na-eme ka ebe a bụrụ otu mpaghara na-eto ngwa ngwa nke ụwa. Akụkụ ndị ọzọ nke Dubai na-eme nke ọma ugbu a gụnyere:
Technology Technology (IT) n'etiti ọtụtụ ndị ọzọ.
Site na mmụba nke ọtụtụ mpaghara ndị a na-emepe emepe, Dubai ewetala ụdị ọrụ ọ bụla. Ọzọkwa, ụgwọ a na-akwụ ndị ọrụ buru ibu, ọrụ ndị a na-enye nnukwu ego na-akpọ ọtụtụ ndị na-achọ ọrụ si gburugburu ụwa kwa afọ. Site n ’iru tozuru etozu na ahụmịhe nke ọma, ndị a na-aga ime ihe nwere ike ịnwe ọrụ ndị a. Ọrụ ndị ahụ chọkwara nkà nke ịsụ Bekee n'ọtụtụ oge.
Akara a choro maka oru
Ihe iru eru maka mpaghara nke ọ bụla dị iche iche doro anya. Ụkpụrụ kachasị na-agụnye:
Education - A na - eguzobe ụlọ ọrụ agụmakwụkwọ kwa ụbọchị ọ bụla na - eme ka ọrụ ịkụzi ọrụ gwuo. Ndị Candidates ga-enwe akara mmụta bachelor na isiokwu ọbụla na-asọpụrụ ma ọ dịkarịa ala na ọ ga-adabara maka ọrụ. Akara B.Ed dị mkpa. Ndị Candidates nwere ahụmahụ nke izi ihe na ụlọ akwụkwọ agụmakwụkwọ (n'ebe ọ bụla) ga-enwe ike ịbanye n'ọrụ.
IT - A ma ama ama ama ama na nhazi ụlọ ọrụ maka ụlọ ọrụ ụwa na Dubai. Ọ gbara ọtụtụ ụlọ ọrụ IT aka nri ka mepere ntọala na mpaghara ahụ. Ndị tozuru etozu nwere akara ugo mmụta ma ọ bụ akara ugo mmụta n'ihe ọmụmụ kọmputa dị ka ndị tozuru etozu itinye akwụkwọ maka ọrụ IT na ọtụtụ ụlọ ọrụ IT a na-akọ na mpaghara gụnyere IBM, Oracle na Microsoft. Asambodo diplọma na nka ọ bụla dị mkpa site na ụlọ ọrụ a na-akwanyere ùgwù na-eme ka ohere nke ịhọrọ ya dịkwuo ike. A na-ahọrọ ndị oghere mmeri nwere ahụmịhe nke afọ 4 +.
retail - A makwaara Dubai ka ọ bụrụ isi obodo ịzụ ahịa n'etiti mpaghara Middle East niile, ọkachasị maka ịrị elu ọnụ ọgụgụ ọnụ ahịa ụlọ ahịa dị n'ógbè ahụ. Ka ọ dị ugbu a, e nwere karịa ụlọ ebe 70 na ọtụtụ ụlọ ahịa ngalaba, ụlọ ahịa na boutiques na-arụ ọrụ na mpaghara. Nzere MBA sitere na ulo akwukwo a ma ama abughi otu ihe ndị a chọrọ iji mee ka ọrụ dị mma na ụlọ ọrụ na-ere ahịa. Asambodo diplọma na usoro nchịkwa azụmaahịa na-abawanye ohere nke nhọrọ.
Ile ọbịa - Ndi umu akwukwo n’agadi akara ugo mmụta bachelọ na njikwa nlele itinye maka ọrụ dị iche iche na ngalaba a.
Dubai Job ọnọdụ
Thezọ kachasị mma chọọ ọrụ na Dubai bụ site na ụzọ ọrụ dị n'ịntanetị. Saịtị a raara nye ọrụ na-enye ndị ọrụ ohere ịchọ ọrụ dabere na mba. Ndị ọrụ nwere ike ịchọgharị ha iji chọọ maka onyinye Dubai dị mma. Google bu, ozo, uzo ozo di nkpa iji chekwaa igba na oge. Achọrọ ndị ọrụ ka ha mepụta akaụntụ na weebụsaịtị ndị a bịakwutere na ndepụta ọchụchọ iji debanye aha ha na nyefee ngwa maka ọtụtụ ọrụ na-enye. Agbanyeghị na ebe nrụọrụ weebụ ọrụ dị ukwuu na-enye ọrụ n'efu, ijikọ ndị otu ọnụahịa na ndenye aha na-akwụ ụgwọ na-eme ka ohere nke ịchọta ohere kacha mma dị.
Ndị ọrụ ụlọ ọrụ na Dubai
Ọ bụ ụzọ ọzọ nwere ike ịchụ ndị na-achọ ọrụ aka maka ụzọ dị mma isi rụọ ọrụ na Dubai. Enwere ọnụ ọgụgụ buru ibu nke ụlọ ọrụ nchịkọta Nke a na-enyere ndị ọrụ na-achọ ọrụ aka. Ozugbo ndị a na-aga imekọtara ụlọ ọrụ ahụ kọwara nkọwa ha - maliteghachi na asambodo (agụmakwụkwọ na ndị ọkachamara), ha ga-achọ ọrụ kachasị mma maka izu ike. Ha na-enye ọtụtụ ọrụ ndị ọzọ dị ka ndụmọdụ banyere ide banyere ịmalite, ntuziaka banyere atụmanya nke ọrụ na mpaghara, atụmanya nke usoro ụgwọ ụgwọ na ịtọlite ​​profaịlụ dị mma n'etiti ọtụtụ ọrụ ndị ọzọ. Imirikiti ụlọ ọrụ na-akwụ onye ọ bụla ụgwọ obere ego maka enyemaka maka ọrụ ha kwa afọ.
Ụzọ kachasị elu iji nweta nchekwa Job na Dubai
Dubai bụ ikekwe otu n'ime ole na ole fọdụụrụ ebe ụwa ebe enwere ebe ọrụ na-arụ ọrụ. Ọbụlagodi nke ahụ bụ otu o si ele ndị bi n'ọtụtụ mpaghara ụwa gụnyere India, UK na USA ọkachasị mgbe ụkpụrụ nke ọrụ na-apụkarị site na ọtụtụ ụlọ ọrụ na - eduga n'oge iyi egwu akụ na ụba.
N'ihi ya, enwere ịnụ ọkụ n'obi dị ukwuu maka ịrụ ọrụ na mba ofesi, ọkachasị maka Dubai, steeti Middle East na United Arab Emirates. Nke a bụ n'ihi na ebe ahụ na-enye ihe atụghị ụtụ ụzọ ndụ nye ndị njikwa ụwa niile. Ndị were gị n'ọrụ site na Dubai ka nwere ndị ọrụ ruru eru si gburugburu ụwa n'ọtụtụ azụmahịa.
Ma ajụjụ bụ isi ka dị otu esi enweta oru na visa igha ebe ahu dika onye oru ndi Algeria. Iji dozie okwu a, anyị abịawo n'ụzọ ndị pụtara ìhè ụzọ ndị na-achọ ọrụ mba ụwa nwere ike isi nwaa ịchọta ọrụ dị mma bụ otu n'ime ebe ụwa chọrọ.
Imirikiti ụlọ ọrụ Dubai na-eme ndị ọrụ nwute kwa afọ, ọkachasị site na mpaghara dịka India na UK. Nkpugheputa oru na-eme n’ebe ndia di n’aho n’aho. Nke a na-abịa otu ohere ileta ma zute ndị nwere ike iwere ọrụ maka ụlọ ọrụ ọ bụla dị mkpa iji nyochaa ụdị ọrụ ọrụ a na-enye. Nke ahụ na-agụnye ịmara nchịkọta ụgwọ na ihe niile ọzọ dịnụ. Ndị na-achọ ọrụ nwekwara ike ịgakwuru ndị na-eweta ọrụ ọkachamara maka ịmegharị mba ụwa ma kpokọta ụfọdụ ihe banyere inweta a visa nye nyere ha aka ije ma rụọ ọrụ na steeti ahụ. Ihe ekpughere a na-enye ọtụtụ ndị mmadụ ụzọ ha ga-esi ebi ndụ ọhụrụ na ịmalite ọrụ ha na Middle East. Ọ bụ otu n’ime ụzọ kacha mma mmadụ ga-esi mee ka ndị ọrụ ya kọwaa ọrụ ndị dị mkpa.
Ọ bụ ụzọ ọzọ dị mfe iji chọọ oke na ohere dịnụ na Dubai. Enwere ọtụtụ Dubai sitere ụlọ ọrụ na - ewe ndị ọrụ na - enye ndị ọrụ ohere ọrụ kwesịrị ekwesị inwe profaịlụ di nma. Enwere ike ịkpọtụrụ ha site na weebụ wee rịọ maka ọrụ ha. E guzobekwara ụlọ ọrụ ụfọdụ na mba dịka India na Pakistan na-arụ ọrụ iji nye ndị bi na ebe enyemaka maka ohere ọrụ dabere na Dubai ọrụ. Agencieslọ ọrụ ndị a nwere ike ịna-akwụ ụgwọ maka ụgwọ ọnwa kwa afọ maka ọtụtụ ọrụ ha na-enye ndị na-achọ ọrụ gụnyere ndụmọdụ gbasara ideghachi azụ ma gosipụta onye na-aga akwụkwọ n'ụzọ ziri ezi. Enwere ọtụtụ ụzọ ọrụ dị n'ịntanetị yana ndị na-achọ ọrụ nwere ike ịchọ. N'ezie portals bụ naanị raara nye maka ọrụ ndị dị na Middle East bia na nhọrọ nke ga - eme ka ndi oru choro ihe oru nile di adi dabere na obodo ndi n’aga ha.
Ngwa mgbatị dị na ndị ọrụ
Ọ ga-ekwe omume maka ndị na-achọ ọrụ site gburugburu ụwa ịkpọtụrụ ndị na-ahụ maka ọrụ site na weebụsaịtị webụsaịtị na nkọwa kọntaktị ndị ọzọ. Ọ nwere ike bụrụ usoro na - ewe oge na - enweghị nkwenye dị ukwuu mana ọ na - azọpụta ndị na - achọ ọrụ n'aka nhịahụ nke nleta ugboro ugboro na ụlọ ọrụ ndị ọrụ na ebubo ha. Ọzọkwa, enwere ụfọdụ ụlọ ọrụ adịgboroja na-enweghị ike ịnye ezigbo ọrụ n'agbanyeghị agbanye ụgwọ ọrụ ahụ. Ndị na - eme ihe achọrọ na - egbochi ndị choro ịdakwasị ụdị ụlọ ọrụ na na-akwado ezigbo ọrụ ohere nzukọ na-enye. Ndị oghere mmeri nwere ike ịchọ weebụ maka ọrụ dị mkpa na mpaghara dị iche iche ma chọọ ohere / ụzọ niile mepere emepe dị ugbu a maka ndị ọrụ na-arụ ọrụ na Dubai. Ndi umu akwukwo nwere ike itinye akwukwo site na webusaiti ha na akwukwo ozi ha kwuru banyere iru ntozuhu ha nile na nka ha na ndi mere ha ezigbo ndi ochichi. Ọ bụrụ na ndị na - ewe ndị ọrụ ọrụ nwere mmasị, ha ga-ezute ndị a na-aga imekọ ọrụ, na-agbatị ụgwọ nke onye ọka iwu.
Ịnọ n'anụ ahụ
Ọ bụ ezie na ọ nwere ike iyi ihe ezi uche dị na ya, ọ bụ otu n'ime ụzọ kachasị mma isi achụ nta ọrụ na Dubai. Ọ nwere ike weghara ọtụtụ mbọ na mmefu mana ịnọ ya n'anụ ahụ nyocha ọrụ nwere ike ịbụ nhọrọ kacha mma ịchọrọ maka ohere dị mma na UAE. Ndi umu akwukwo nwere ike ibu omuma ha malitegharia otutu ihe omuma ha, ikike ha na akwukwo ndi ozo igha nzukọ a ma tinye aka na-emeghe ohere obula di na mpaghara a. Usoro ọrụ nwere ike ịdị iche site na nzukọ gaa na nzukọ dabere na ụdị azụmahịa. Ọ bụ ezie na ụfọdụ nzukọ azụmahịa mpaghara na-arụ ọrụ na elekere nke 8 AM ruo 7 PM na oge izu 3 n'etiti, azụmahịa na-arụ ọrụ na-arụ ọrụ na 9 AM ruo 6 PM clocks. Ebe Fraịdee bụ ngwụcha izu ụka maka mmadụ niile, ụfọdụ ngalaba na-arụ ọrụ na ngwụcha izuụka Sọnde ruo Tọzị.
Ndị a bụ ụzọ kachasị elu nke ịchọta ọrụ na Dubai. Ụzọ ndị ọzọ gụnyere agụnye netwọk nkeonwe ma ọ bụ site na mgbasa ozi nchịkọta nke ụlọ ọrụ ahụ kwadoro.
Kedu ihe mere Dubai kachasị mma maka International Job Search?
Dubai, otu n'ime ndị isi na-emepụta mmanụ n'ụwa bụkwa otu n'ime ha na-eduga ndị na-enye ọrụ ugbu a maka ọrụ ọdụ ụgbọ elu. Otutu otutu ihe agbakorita iji mee ka isi obodo United Arab Emirates buru otu n’ime ihe ndi kachasi nma n’cho oru n’ebe uwa nile. N'okpuru ebe a bụ ụfọdụ n'ime isi ihe mere ka mee ka Dubai bụrụ ebe ọrụ maka nrọ maka ọtụtụ ndị aga-aga.
Ọ bụ otu n’ime ihe ndị kacha eme ka ọtụtụ ndị mmadụ na-echefukarị ma ọ bụ chefuo ya. Nke a bụ kachasị n'ihi na anyị nwere ọnọdụ ịkwụ ụgwọ akụkụ buru ibu nke ego anyị tara ahụhụ nye gọọmentị nke anyị anaghị eche maka oke ibu a, ọkachasị na ụfọdụ ebe ụtụ isi nwere ike ịdị elu dịka 40% nke mkpokọta ịkpata ego. Nke ahụ pụtara maka dollar ọ bụla anyị nwetara, a chọrọ ka anyị kwụọ ndị isi na-achị 40 cents ma nwee afọ ojuju na cNUMX cents n'agbanyeghị nraranye anyị na ịrụsi ọrụ ike. Mgbe etinyere ya na nnukwu igwe, ọ pụtara na anyị ga na-arụ ọrụ n'efu maka akụkụ ụfọdụ nke afọ yana oge ọ ga-abụ site n'otu ọnwa ruo ihe dịka anọ dabere na ebe i si. N'aka nke ọzọ, amaara ama na Dubai na-atụpụpụ ego ndị na-eburu ibu na-akpata ego, si otu a nye ha ohere ịnụ ụtọ ọrụ ha niile na ịrara onwe ha nye.
Nchịkọta kachasị mma
Isi ihe mere ndị sonyere si n'akụkụ ụwa niile ji achọsi ike isonye na ọrụ ndị dabere na Dubai bụ ngwungwu nkwalite ụgwọ ọrụ nke ndị were ọrụ na-enye. Na ngụkọta oge, nchịkọta ndị ahụ dị ka 20% dị elu karịa ọtụtụ mba ndị ọzọ ga-akwụ gị ụgwọ. Nke a bụ amụma ebumnuche nke Dubai tinyere iji rata ya na onyinye ndị kachasị mma si n'ofe ụwa. Yabụ na ịnwe ụtụ isi na - adịghị atụ ụtụ isi nwere ike ịkwụ ụgwọ ego buru ibu. Dịka ọmụmaatụ, mmadụ na-enweta $ 100,000 n'ime otu afọ ma kwụọ 40% ụtụ isi na-ewe n'ụlọ naanị $ 60,000 kwa afọ. Maka otu ndoro-ndoro, Dubai na-akwụ $ 120,000 $ na ụtụ isi, onye ndoro ndozi na-edebe ya. Nke ahụ bụ okpukpu abụọ okpukpu abụọ ọ ga-eji obi ụtọ nọrọ na-eche mgbe ọ kwụsịrị ụtụ isi. N'ihe banyere teknụzụ ọ bụ naanị ụgwọ 20% ka ị na-arụrụ ọrụ, na njedebe nke ụbọchị, ị na-anata ụgwọ ọrụ okpukpu abụọ n'ihe ndị bara uru.
Izu na reimbursements
Site n'inwe ahụmịhe na ọkwá, bịanụ na ịkwụghachi ego. Ọ bụ ezie na injinia larịị ma ọ bụ onye njikwa ga-enweta ụgwọ ọnwa kwa ọnwa dịka AED 10,000 gaa AED 15,000 dabere na iru ntozu ya, onye na-ahụ maka ọrụ nwere ike itinye akpa karịa AED 80,000 na ngagharị ọnwa. Na elu nke a, enwere ọtụtụ uru ndị ọzọ na-ewe gị n'ọrụ na-enye ndị a chọrọ ka ha malite site n'ụlọ obibi n'efu, ụgwọ akwụkwọ ekwentị, ụlọ ọrụ nlekọta, otu tiketi ụzọ ụlọ kwa afọ na ọtụtụ ndị ọzọ. Maka nwa akwukwo a enwetala $ 120,000, ogha maka ulo, ulo njem na ihe ndi ozo di nkpa ga-enweta ebe di $ 10,000 ma obu karia. Ọ bụ ezie na ọ chọrọ mkparịta ụka siri ike maka ndị na-aga ntinye ọkwa, na afọ na ahụmịhe, ihe ndị a dịịrị ndị chọrọ n'okporo ụzọ Dubai. Nke a putara na ha enweghi ego ha ga-eji na-elekọta ma na ihe ha na-enweta bu nke ha, ya na otutu uru ndi ozo.
Ezumike na ndụ nke ndụ
Ọtụtụ n'ime ndị otu n'ozuzu ha na-enye ngwụsị izu ụbọchị 2 na elekere 8 nke ụbọchị ọrụ. Ndị a bụ ntakịrị ihe ọchị. Akụkụ kachasị mma bụ ndị ndoro anya nwedịrị ike ịnụ ụtọ ezumike were ọnwa iji leta ụlọ ha ma soro ndị ezinụlọ ha na ndị enyi ha nwee oge dị mma. Site na mkparịta ụka tiketi ikuku na-akwụghị ụgwọ nke ọ ga-akacha amasị inweta, ịrụ ọrụ na Dubai bụ nrọ nke ọtụtụ ji. N'ịgbakwunye, afọ ojuju ọrụ nke ndị a na-aga ime na-enweta site na ọrụ ndị dabeere na Dubai abụghị ihe ọ bụla nwere ihe ndoro-ndoro. Na-arụ ọrụ n'elu ụlọ dị elu, ihe owuwu ma ọ bụ ụlọ ọrụ kachasị mma na ọkwa mba ụwa na-eme ka ntụkwasị obi sie ike n'etiti ndị a na-aga ime. A na-eme ka o nwekwuo ume site na ọnụ ala ụgbọ ala na ọnụ ahịa mmanụ ụgbọ ala na-eme ka ndị nwụrụ anwụ na-ekpori ndụ karịa oge n'agbanyeghị usoro ọrụ oge niile.
Ndị a bụ isi ihe ndị na-eme ka Dubai bụrụ otu nhọrọ kachasị ewu ewu maka ndị na-aga mba ofesi iji bulie obi ụtọ ha. Enwere ụzọ dị iche iche nke onye na-achọ ọrụ ga-esi tinye akwụkwọ maka mmeghe na ngalaba dị mkpa. Ọnụ ụzọ ntanetị, ụlọ ọrụ na-anata akwụkwọ na ikpughe ọrụ bụ ụzọ kachasị mfe maka onye na-achọ ọrụ ịchọ profaịlụ kwesịrị ekwesị ha nwere ike itinye maka ya. Ha nwekwara ike kpọtụrụ onye were gị n'ọrụ n’ebe dị anya site na webụsaịtị ha ma ọ bụ nkọwa kọntaktị ndị ọzọ na faịlụ na ntinye akwụkwọ ahụ. Mgbasa ozi mbanye nwere ike ịbụ nhọrọ ọzọ ịmatakwu banyere ohere dịnụ.
Ndị Kasị Nwee Ọhụụ Ọrụ Job nke Dubai
Site na Dubai World Trade Center gaa Burj Khalifa ihe nile dị n’etiti bụ ihe pụrụ iche gbasara steeti Dubai. Ọ bụ nke mbụ n'ihe banyere nha na nke abụọ n'ihe banyere ọnụ ọgụgụ mmadụ n'etiti ụmụnne niile nke UAE na UAE. Sheikh Maktoum bin Buti al Maktoum, nke guzobere na 1833 abụghị naanị otu akụkụ dị mkpa mpaghara ahụ kamakwa ama ama maka azụmahịa. Ọnọdụ steeti mara mma na-eme ka ọ bụrụ ezigbo nhọrọ maka azụmaahịa ụwa niile na mpaghara mmanụ na gas, ego, njem na ọtụtụ ndị ọzọ. Ọ dị na mpaghara ndịda ọwụwa anyanwụ nke Ọwara Persian, ugbu a ọ bụ otu n'ime ọrụ kachasị achọ ọrụ n'etiti ndị na-achọ ọrụ mba ụwa, ọkachasị maka uru ọ na-enye na ngalaba dị iche iche.
Ndị ọrụ a ma ama na steeti gụnyere:
Ụlọ ọrụ mmanụ
Ọ bụ otu n'ime ụlọ ọrụ kachasị na Dubai ọ bụ ezie na ọ bụghị usoro nke akụnụba obodo. Nchọpụta mmanụ mbụ na mpaghara ahụ gbadara erughị 50 afọ ma belata nke ukwuu. Nchọpụta mechara mechara bụrụ nke ada otu n'ime ndị na - ebute mmanụ na - emegharịrịrịrịrịrị ebe ahụ ka ọ bụrụ ogige nke ndị na - achọ ọrụ zuru ụwa ọnụ si n'ofe ụwa niilee. Site na nnukwu mmanụ dị otú a sitere na ụlọ ọrụ mmanụ, a na-emepe emepe maka ndị tozuru etozu isonye na mpaghara ma weta mmụba na ọrụ ha. Ngalaba ahụ na-enye nnukwu ego maka ndị kwesịrị ya site na ụgwọ ụgwọ kachasị ala maka ndị injinia ọkwa na ndị njikwa sitere na 12,000 ruo 15,000 AED. Ọnụ ego kachasị elu nwere ike ịdị na 80,000 AED ma ọ bụ karịa maka ndị isi ọrụ aka na ụlọ ọrụ. Ihe ngwugwu a kwụrụ ụgwọ nwere ike ịdị iche iche site na asambodo, ahụmịhe na mba onye chọrọ.
Ụlọ njem njem nleta
Ọ bụ nnukwu ụlọ ọrụ ọzọ na-anọchite obodo UAE ma na-enye mba ahụ nnukwu nnweta ego si mba ọzọ. Industrylọ ọrụ a amụbaala nke ukwuu na mba na-adabere na ya maka iwusi akụ na ụba ya ike n'oge a. Ọ bụ ezie na isi ego na - erite site na ụlọ ahịa, ihe owuwu na nke antica na - adọta n’ọtụtụ ndị njem na - eme njem nleta. A makwaara ịbụ obodo isi obodo nke ọgbakọ mba Middle East niile, Dubai na-enye ọtụtụ nnukwu ụlọ ahịa, ụlọ ahịa, boutiques na azụmaahịa ndị ọzọ. Site n'iwupụta ihe owuwu ọhụrụ a, ọtụtụ ndị njem na-abịa ezumike maka ezumike ma ọ bụ obere njem ma na-emefu ego buru ibu na-eduga na ịrị elu nke akụ na ụba mba ahụ. Ihe gbakwunyere na ihe ijuanya bụ na ụlọ ọrụ gas na mmanụ na-enye aka naanị 6% nke GDP nke ndị isi. Nlegharị anya na-enye aka na akụkụ ka ukwuu nke aka ekpe. N'ihi nke a, Oku oku o buru otu uzo kachasi nma ndi choro oru ka ha abia soro sonyere oru rue uto nke aku na uba obodo. Ngalaba ahụ ghe oghe maka ma ọ bụrụ na ọ ga - eme ma ọ bụrụ na ndị toro eto nwere ahụmahụ isonye ma nwee ọzụma n'ọrụ.
Dịka anyị kwuworo, owuwu nke ihe owuwu ọgbara ọhụrụ a bụ nke zuru oke na mba. Site na ulo uka rue ulo, site na ulo akwukwo muta rue ulo oru ndi n’achi ahia, obodo a bu ihe ohuru ma eme otutu ndi ozo n’abia. Nke a na - eme ya ka ọ bụrụ otu n'ime ụlọ ọrụ kacha mma maka ndị na - achọ ịga njem, ọ kachasị site na ngalaba nke usoro ihe owuwu na injinịa obodo iji gosipụta nkà ha na steeti United Arab Emirates. Ndị ntorobịa nwere iru eru na ahụmịhe ha chọrọ nwere ike itinye aka ngwa ngwa maka ọnọdụ niile dịnụ na-enweghị mgbochi.
Mmụba nke njem nleta enyegoro ịrị elu nke nnukwu ụlọ ahịa ma ọ bụ ịrị elu nke nnukwu ụlọ ahịa mepere emepe emepela ụzọ maka mmepe nke ụlọ ọrụ njem ihe anya. Naanị ihe doro anya bụ na enweela ọgba aghara dị egwu na ngalaba ịzụ ahịa, na-ekele ndị njem na ndị riri ahụ bi na Dubai. E guzobelarịrị ụlọ ebe a na-ere ahịa 70 na Dubai n'oge ndị na-adịbeghị anya na nke ahụ chọrọ expats mba dị mkpa iji tinye n'ọrụ. Ọ bụ ezie na ntakịrị ihe achọrọ maka onye ga-achọ itinye akwụkwọ maka ọrụ ahụ bụ ogo MBA, asambodo diplọma na ọmụmụ azụmaahịa nwere ike inyere ha aka inweta nnukwu ọrụ na mpaghara ahụ. N’inwe ahụmịhe zuru ezu, ụgwọ ọnwa, pịrị ọnụ na akụrụngwa ndị ọzọ nwere ike ịdị elu.
Ndị a bụ ụfọdụ n'ime mpaghara ndị ama ama na ugbu a na-adọta ọtụtụ ndị mba ọzọ na-aga ime maka ohere ọrụ a na-enye. Akụkụ ndị ọzọ dịka ngalaba agụmakwụkwọ na mpaghara IT na-enyekwa aka nke ukwuu n'inye ndị ọrụ ohere. Ewezuga nke ahụ, ọrụ ego na ọrụ metụtara ya na-adọtakwa na nnukwu ngwa site na ndị na-eme njem mba ofesi.
Atụmatụ iji chebe ihe kasị mma achụmnta ego na Dubai
Dubai na-abụ otu n'ime ihe kacha adọrọ adọrọ maka ndị na-achọ ọrụ ọrụ ọkachasị maka uru na-enweghị atụ ha na-enye ndị chọrọ. Earnnata ego a na-akwụghị ụtụ isi, ọnụego ụgwọ a na-akwụ ụgwọ buru ibu, ọtụtụ ogige na ụlọ ọrụ ndị ọzọ, ohere ọrụ n'ọtụtụ ngalaba nke Dubai anọwo na-arị elu. Ọzọkwa, ebe ọ bụ na otu n'ime ebe ndị njem na-aga njem na steeti na-emepe emepe, ngalaba dị iche iche emepeala ọtụtụ ndị ga-aga ebe niile n'ụwa. Akụkụ na-etolite etolite na mpaghara a gụnyere ihe owuwu, ala ụlọ, azụmaahịa na ọrụ ego n'etiti ọtụtụ mpaghara ndị ọzọ. Dubai si otú a nye ohere niile expats ịgbakwunye na a elu agbam ume ha ọrụ eserese na tinye na ụfọdụ mba ọrụ ahụmahụ ka ha malitegharịa. N'okpuru ebe a bụ ụfọdụ ndụmọdụ ịmalite site na usoro ntinye akwụkwọ maka ọrụ dabere na Dubai.
Ịhọrọ na profaịlụ ziri ezi
Ọ baghị uru ma ọ bụrụ na onye na-achọ akwụkwọ bụ onye ga-enwe ọkwa ọkwa ma ọ bụ onye nwere ahụmahụ ma ọ bụrụhaala na ha na-achọ maka profaịlụ kwesịrị ekwesị. N'ime ọtụtụ mpaghara na-emepe emepe na Dubai, ọ dị mkpa maka ndị na-achọ ọrụ ịmara ihe ga-adabara ha mma. Industrylọ ọrụ ọ bụla nwere ọtụtụ ngalaba yana mpaghara ọ bụla chọta ngwa na ọtụtụ ọrụ. O di nkpa di nkpa maka onye choro oru ikpebi nhota ya. O nwere ike iju gi anya na onye ochichi hoputara. Ọ bụ ezie na ọtụtụ chọrọ ịrụ ọrụ n'otu ụlọ ọrụ n'ihi na ha chọrọ, ụfọdụ chọrọ ịbanye n'otu mpaghara n'ihi na a zụrụ ya maka ya. N'ọnọdụ ọ bụla, iru eru dị oke mkpa maka ọrụ ndị ọkachamara na Dubai site na ọrụ ndị dabere na nkà nwere ike bụrụ ihe na-akụda mmụọ n'akụkụ amaokwu a.
Inweta aka na nhọrọ nbudata
E nwere ọtụtụ nhọrọ dịnụ Maka ndị na - achọ ọrụ ọ bụla chọrọ itinye akwụkwọ maka ọrụ na Dubai. Ha nwere ike tinye aka n’ọrụ ngosi nke a na-eme kwa afọ n’obodo ndị bụ isi ebe ndị na-ewe mmadụ n’ọrụ na-ewebata ndị ọrụ buru ibu gụnyere India na ọtụtụ mba ndị ọzọ. Ha nwedịrị ike idebanye aha ha na saịtị ntanetị dị iche iche raara nye ndị na-achọ ọrụ ma ọ bụ lelee klaasị iji chọta ohere dị mma maka ha. Nhọrọ ọzọ nwere ike ịbụ ịga leta ụlọ ọrụ na - ewe ndị ọrụ ego ụgwọ nwere ike ikwu maka ego maka ọrụ ha kwa afọ. Ọtụtụ ndị ụlọ ọrụ adịgboroja dị otú ahụ abịawo n'oge a na-eme ka o siere ndị na-achọ ọrụ ike ịmata onye ha ga-atụkwasị obi na ihe kpatara ya. Ndị oghere mmeri ga-enyocha weebụsaịtị weebụsaịtị nke ndị otu a ma tinye akwụkwọ maka ohere kwesịrị ekwesị yana leta mkpuchi na ịmalite ịnye nkọwa ha niile. Nmekorita nke gi dika enyi, ndi ezinulo ma obu ndi ozo mara gi ịrụ ọrụ na Dubai ma ọ bụ Abu Dhabi nwere ike ịbụ nhọrọ ọzọ ị ga-atụle. Ndị na-achọ ọrụ nwedịrị ike ịga Dubai ka ha jiri aka ha chọọ profaịlụ dị mma nke kwekọrọ na nzere ha.
Eji akwụkwọ edemede buru ibu bia
Ọ bụ otu akụkụ kachasị mkpa nke usoro itinye akwụkwọ n'ọrụ. Withbịpụta leta mkpuchi nke na-amanye ndị na - ewe mmadụ n'ọrụ ka ha nwee mmasị banyere onye a na - achọ ịlụ bụ ọrụ siri ike. Ndị ụlọ ọrụ batara na-enye ọrụ dị otú ahụ na-akwụ ụgwọ ụgwọ ọrụ ọrụ. Isi ihe dị n’akwụkwọ ozi mkpuchi kwesịrị ịbụ n’ihe abụọ bụ isi. Na mbu, ntinye uche kwesiri ibu n’igwaa ihe na - eme onye ochicho nma maka oru a. Ewezuga nke ahụ, ọ dị mkpa ịkọwapụta ihe kpatara onye were gị n'ọrụ ga-ahọrọ ndị na-achọ ọrụ n'etiti ndị niile ọzọ. Nke ahụ na-ekwupụta uru ndị ọzọ onye ọrụ ga-elegara anya inweta mgbe ọ na-akwado onye a na-achọ ọrụ. Ọ dị mkpa ịkpọtụrụ onye na-agụ ya na akwụkwọ ozi mkpuchi ahụ ka o kwere mee, naanị maka ụzọ akparamagwa nke mmekọrịta.
Na-abịa na nnukwu resume
Maka ngwa oru ọ bụla, ọ bụ mmalite nke na-ekwuchitere ndị na-aga ime. Ọ bụ nzọụkwụ mbụ nke onye njikwa nke Human Resource ga-amata onye na-achọ ọrụ. Mbido ahụ kwesịrị ịgụnye nkọwa niile gbasara onye ọrụ na-achọ ọrụ gụnyere ọkachamara agụmakwụkwọ, ahụmịhe ọrụ, ọrụ ntinye akwụkwọ, ọrụ e mere na nkọwa ndị ọzọ dị mkpa. Ọ bụ ezie na usoro maka nchịkọtaghachi nwere ike ịdịgasị iche site na mba ruo ná mba, ịbịakwute otu mkpirikpi peeji nke nwere ike ịbụ nhọrọ ọjọọ na Dubai. Ọ bụ ezie na nha ga-adabere na nruchapụta na ọkachamara nke nwa akwukwo ahụ, na-abịa ma ọ dịkarịa ala otu peeji nke nwere ike ịmị mkpụrụ ma ọ bụrụ na ọ gaghị ekwe omume ịbịakwute atọ. Ọ dị mkpa ka ndị na-achọ ọrụ ịkọ eziokwu niile na-etu ọnụ ma ọ bụ na-ekwubiga ihe ókè nwere ike imebi nchọta nke onye ọrụ ahụ ozugbo.
Ọ bụrụ na a onye na-acho oru na-aga Dubai icho aru oru, ihe nwere ike ịdị iche na nke gbagwojuru anya maka na ha agaghị enwe onye ọ bụla ga-eduzi ha. Mana ka ị na-etinye site na ọnụ ụzọ ntanetị, ntanetị, ihe ngosi ma ọ bụ ụlọ ọrụ, ndị a na-aga ime nwere ike ịtụ anya ịnụ ụtọ ụfọdụ ntuziaka maka usoro ntinye nke ọma.
Atụmatụ Interview maka Job na UAE
Ajụjụ ọnụ bụ akụkụ kachasị mkpa nke akwụkwọ ọrụ gị. Mgbe itinyere CV kacha mma, akwụkwọ ozi kpuchie ya, ma gosi ya dịka oge ọ bụla, ị ga-apụta n’ihu ndị otu. Ndị ajụjụ ọnụ ga-enyocha ike gị ma gosipụta ihe ikwuputara na CV. Nye ọtụtụ ndị ọrụ, iru eru ọkachamara bụ naanị ihe ndabere nke usoro itinye akwụkwọ. Ihe dị mkpa n’ịgba ajụjụ ọnụ bụ itinye aka n’onye ọrụ iji nwalee ma ụdị onye ọ bụ prowess dabara adaba na omenala na nhazi ya.
Ikwesiri igosiputa onwe gi n’ihu nzuko ajuju a. Etu ị na - ebu n’onwe gị n'ọkwa nke ọ bụla nke ụbọchị ajụjụ ọnụ, site na oge ị gafere n'ọnụ ụzọ na-ekpebi ọdịnihu gị. UAE so na mba ndị kachasị elu n'ụwa niile na-ejikọ teknụzụ ngwa ngwa. Never maghị ụdị ajụjụ ọnụ a ga-ewe gị; ụfọdụ ndị were ọrụ ga-achọ ime ihe ịtụnanya.
Ndị na-eme ọrụ maara na ị na-abịa kwadebere na ị ga-akpa àgwà ma na-ekwu okwu ma ha chọrọ inweta ezigbo àgwà gị. Onye ọrụ na-achọ ịma otú ị si emeghachi gburugburu ebe dị iche iche. CCTV bụ ụzọ aghụghọ nke ndị na-agba ajụjụ ọnụ, ị maghị ebe ọ ga-edozi ma ọ bụ otu esi etinye ya. Nke a bụ ya mere ị ga-eji ejiji kwesịrị ekwesị na mmekọrịta kwesịrị ekwesị na onye ọ bụla site n'ọnụ ụzọ ámá. Mgbe ị ga-eme nchọpụta, ị nwere ike ọ gaghị ama onye nwe ma ọ bụ onye ị ga-ezute na panel ahụ.
Ka o sina dị, ekwesighi ịtụ ajụjụ ọnụ ajụjụ ọnụ. Ndị a bụ ụfọdụ ndụmọdụ ị ga-ejide obi na ntụkwasị obi.
Nnyocha banyere ọnọdụ gị
Shouldkwesịrị ịkọwa ọrụ ọrụ gị. Choputa ihe oru choro abughi nani oru nke ulo oru mana ihe onye were gị n’ọrụ na-atụ anya ka mmadụ mejupụta ọnọdụ ahụ. Ewezuga nkọwa ọrụ, ndị were gị n'ọrụ chọrọ àgwà dabara adaba n'ọnọdụ ahụ. Nkuzi nka bu ihe ntuputa nke ihe ndi n’enye oru choro na oru, o nwere ike buru maka koodu uwe ma obu otu esi ekwu okwu. Ọ bụ ezie na ịnweghị ịme ka onwe gị na onye ị na-arụrụ ọrụ nweere onwe gị, ị ga-eme ihe ndị a tụrụ anya gị.
Ọ bụrụ na ọ ga-ekwe omume, chọpụta banyere onye ọrụ gara aga n'otu ọnọdụ ahụ. Ọ bụrụ na ị nwere ahụmahụ n'ọhịa, ị nwere ohere ka mma maka ịchọta ọrụ ahụ. Chọta ma chọpụta ihe mere onye ọrụ mbụ na-arụ ọrụ na ọrụ arụ ọrụ na-achọ n'aka onye were ọrụ.
Gụnye nke a na nkọwa gị. Jide n'aka na ị maara ihe niile ị na-atụ anya ya.
Kwuo banyere ahụmahụ gị
Kama ịtụkwasị uche na nka ndị ọkachamara na ebe ị mụrụ, kwuo banyere ahụmịhe ọrụ. Soro onye na-agba gị ajụjụ ọnụ nke rụzuru na nsogbu n'ebe ọrụ. O bu ohere iji gosiputa na iru eru maka oru a nihi na i mara ihe ya abu. Dị ka ọ na-adịkarị, ndị were mmadụ n'ọrụ na UAE na-akwado ndị chọrọ mmeri na ahụmịhe bara uru n'ọhịa. Ọ bụrụ n’ile anya ịchọrọ maka ọrụ na ọnwa ole na ole na UAE, gbakwunye na nka, wee chọta ebe ị ga-agbakwunye na ahụmịhe gị, ọ dị mkpa maka ịchọta ọrụ na mba Arab.
Ọtụtụ ndị na-achọ ọrụ na-ezighị ezi nkà maka ịrụ ọrụ; arụ ọrụ na ebe ọrụ chọrọ ntinye akụrụngwa ahụ na ihe ngosi. Mgbe a gbara ajụjụ ọnụ, nke a bụ ihe onye were ọrụ chọrọ ịnụ. CV gị enyela gị ohere maka ajụjụ ọnụ; ya mere, were ya dika ohere iji kọwaputa ihe ndi ozo site na nleputa. N'ajụjụ ọnụ bụ banyere ime ka onye ọrụ gị kwenye na ị maara ihe ọrụ ahụ gụnyere na ọrụ ahụ.
Na mgbakwunye na nkọwapụta ọrụ zuru ezu na-adabere na nkà chọrọ, ị ga-ama maara na ụlọ ọrụ na-atụ anya. Ọrụ gị kpọmkwem mgbe ị sonyere ndị otu.
Mgbe mkparịta ụka gị bụ mkparịta ụka abụọ, ekwula okwu. Ka onye gbara ajụjụ ahụ na-achịkwa nnọkọ ahụ n'ihi na ha bụ onye ọbịa ahụ. Ọ bụ ezie na i kwesịrị ịkọwapụta azịza gị ma zere ịdị nhụsịrị, ịkwu okwu nke ukwuu nwere ike ịgụta ọnụ na panel ahụ. Ọzọkwa, enwere ike ịkọwa ya dị ka onye na-eme ka mmadụ bụrụ onye na-achịkwa ya, nke nwere ike bụrụ ihe ọjọọ maka ọrụ gị. Na-ekwu okwu dị oke ka onye na-agba ajụjụ ọnụ nwekwara ike ịkọwa dịka onye dara ogbenye na-enye ntụziaka n'ihi na ị na-ekwu okwu karịa ịnụrụ ntị. Ụlọ ọrụ nyochaa nwere ike ị dee gị n'ụzọ doro anya na-aghọta na ị bụ ọrụ dị ukwuu.
E wezụga nke ahụ, ị ​​nwere ike ịbịghị uru mgbe ị na-ekwu ọtụtụ ihe. Ire gị nwere ike ileghara ma gosipụta àgwà na-adịghị mma. Ọ bụ ezie na ị kwesịrị ịsara ahụ ma gbaa onye na-agba ajụjụ ọnụ ume, enwela onwe gị n'efu. Ọ bụ nguzozi.
Should kwesịrị inwe echiche ziri ezi n'ụzọ ọ bụla mgbe ị na-aga ajụjụ ọnụ. N’ezie, ị naghị ewepụta oge iji mee nyocha na iji ejiji dịka ị na-atụ anya ịhapụ ọrụ. Agbanyeghị, ị kwesịrị ịdị njikere ịnabata ụdị nzaghachi ọ bụla. Ọ nweghị ihe doro anya na UAE ahia ahia. Hapụ ọrụ apụtaghị na i rughị eru n'ụzọ ọ bụla. Ọ nwere ike ịbụ otu ọnọdụ ma ị bụ ọtụtụ ndị na-eme ntuli aka a ga-ahapụrịrị onye ọzọ. Ihu obi g’enyere gi aka iwepu obi nkoropu, nke adighi elebara ndi oru anya na UAE.
Ihe 7 A Na-achọ Onye Na-achọ UAE na UAE
UAE nwere ohere inweta ọrụ dị oke ọnụ. Agbanyeghị, ịnweta ọrụ na mba Arab abụghị ihe doro anya. Tokwesịrị ịghọta ọdịnala, ihe ndị akọwapụtara maka ndị ọrụ ọ bụla, ma wepụta akwụkwọ ozi mkpuchi gị n'ụzọ kachasị mma.
E wezụga echiche ọkachamara gị, ọ dị mkpa ịghọta gburugburu na atụmanya nke ob ugh i nan i na onye were ya n ’or u ma na ya na omenaala ya. Ọzọkwa, ịkwesịrị ịghọta gburugburu ebe iwu kwadoro iji zere ihe ọ bụla merenụ mgbe ị na-achọ ọrụ.
Lee ụfọdụ ihe dị mkpa ị kwesịrị ịma:
Dịka onye na-achọ ọrụ, nke a nwere ike ịbụ anya ụwa gị. Ugbu a, naanị ihe ị chọrọ bụ ọrụ na ụgwọ ọrụ na-adọrọ adọrọ. Agbanyeghị, ị ga - abịa n ’eziokwu na ịchọrọ izu ike ma ọ bụ opekata mpe ezumike. Karịsịa, mgbe ị bụ onye njem, ezumike dị mkpa. Imirikiti ụlọ ọrụ dị na UAE na-ekwe ka ụbọchị kalenda 30 dị ka ezumike kwa afọ maka ndị si mba ọzọ. A ga-akwụ gị ụgwọ maka ezumike ọha na eze, nke na-abụghị akụkụ nke ụbọchị 30. A naghị agụ ezumike ọrịa n'etiti ụbọchị ọrụ ọrụ 22 nke ezumike ụgwọ.
Ọ dị oke mkpa iji mkparịta ụka ndị a na-akparịta ụka iji mee atụmatụ nleta gị, n'agbanyeghị na anya gị na obodo gị. Ịbụ otu n'ime ndị a ga-enyere gị aka izere ịkwalite okwu ahụ n'ụzọ na-adịghị mma nye onye were gị n'ọrụ.
UAE bụ mba Arab mere ya maka iji asụsụ Arabik mee ihe dịka asụsụ asụsụ mba ụwa. Ga-ezute asụsụ ahụ site na nkwekọrịta ọrụ iji nweta nkwekọrịta maka ebe obibi gị. Ga-enwe ahụ iru ala karịa ọ bụrụ na ị nwere nghọta n’asụsụ ahụ; Yabụ, ọ bụ ihe amamihe dị na ya ịsụ asụsụ dị obere ma ọ bụ zuo oke tupu ịkwaga UAE. Ọ ga-eme ka ndụ gị dị mfe.
o sina dị, UAE bụ mba nwere oke ikuku na ọrụ nwere ndị mbịarambịa na-achị. Asụsụ Bekee, Urdu, Hindi na Farsi bụ ndị juru ebe niile n'asụsụ ndị ọzọ. Ọzọkwa, ọtụtụ ụlọ ọrụ dị n'ụlọ ọrụ na-ele ọbịa nke ọma gụnyere ndị ụgbọ elu na nnukwu ụlọ ahịa chọrọ ndị ọrụ ka ha mara ọtụtụ asụsụ.
Visa na Passport
Dị ka onye njem, Paspọtụ bụ isi ihe achọrọ. Ọzọkwa, chọrọ UAE VISA, ma dịka onye njem ma ọ bụ naanị nleta. Nke a ga - eme ka ị banye UAE. Achọrọ ka ịnweta ikike ọrụ ọ dịkarịa ala ọnwa 3 tupu mmalite gị. A ga-enye gị akwụkwọ ikike ma ọ bụ akwụkwọ ikike njem na-adịgide adịgide ma emesịa ma ọ bụrụ na ị nweta ọrụ. Ogologo oge ikike ahụ ga-adabere na nkwekọrịta gị.
Mgbe ịchọta ọrụ zuru oke na ibi ndụ dị ka onye bi na UAE, onye òtù ọlụlụ gị nwere ohere ịnweta ọrụ oge-oge na ikike ọrụ iji rụọ ọrụ na UAE.
Anbụ mba Arab, Alakụba bụ okpukpe na-achị achị n’ọtụtụ obodo. Ọ bụ okpukpe gọọmenti. Ikwesiri imuta ihe banyere okpukpe ha nke oma ka ị ghara ime ka onye were gi ogu njo. Dịkarịa ala, ebidobela iji aka na ụmụ nwanyị, ọ bụ ihe na-ekwesịghị ekwesị. Agbanyeghị, ndị were mmadụ n'ọrụ n'obodo ukwu dịka Abu Dhabi na Dubai na-anabata ma na-asọpụrụ okpukpe ndị ọzọ.
Otu n'ime ihe ndị kpatara UAE bụ ọkachamara na ndị ọkachamara ma na-adọta nnukwu ndị ọrụ ọ bụla kwa ụbọchị bụ n'ihi ụtụ isi ego. Enweghị ụtụ. Ọnụ ego dị elu nke ibi n'obodo ukwu dị ka Dubai na-ekwu na pasent ndị ọzọ na ego ego. Ndị ọrụ ụlọ ahịa na-ahụkarị maka ụlọ ọrụ ile ọbịa ka ha tinye ọnụego 10 maka ụgwọ ego. Ọ bụghị naanị UAE ka ị ga-esi na-akwụ ụgwọ maka ego a. Otú ọ dị, ị ga-enyocha ego gị oge ọ bụla na ọnụ mgbe ọ dị mkpa, karịsịa ebe a na-ewepu ụgwọ ọrụ.
UAE na-agba ọsọ na atumatu. Ọ bụrụ na ị nọ n'akụkụ na-ezighi ezi nke iwu ahụ, bụrụ ụlọọrụ ma ọ bụ gburugburu ebe obibi, jide n'aka na ị ga-akwụ ụgwọ dị oke maka iwu na-abụghị nke. Ọchịchị obodo dị ike; enweghị nkwenye na iwu ahụ n'agbanyeghị na ọrụ gị. Dị ka onye na-achọ ọrụ, ịnwere ike ịzere ego ọ bụla na-enweghị isi ma ọ bụ akwụkwọ ndekọ dara ogbenye nke nwere ike imebi na CV gị. Ndị na-arụ ọrụ na-elekwasị anya n'àgwà ọma na omume ọma. Ebulata ma ọ bụ gbaa mmiri ọ bụla, iwu UAE kwadoro!
Eziokwu ahụ A na-achịkwa UAE na usoro iwu na iwu siri ike, ọ bụ otu n'ime mba kachasị nchebe iji biri dịka ndị ọbịa. Ọzọkwa, Islam dị ka gọọmentị gọọmentị chọrọ ụkpụrụ omume na ọha mmadụ mara mma. UAE nwere mmebi iwu dị ala n'ihi ọdịbendị, okpukperechi yana ike ndị mmanye iwu. Mba a etinyela aka na ngwa nchekwa nke igwe na teknụzụ iji kwalite nchekwa n'akụkụ niile nke obodo. N'ezie, gburugburu ebe nchekwa dị mma bụ ihe kachasị ebute ọnụ ọgụgụ ndị ọrụ nchekwa na mba.
Zere uwe ndị na-ekpughe ihe n'ihu ọha; ọ bụ megide omenala na okpukpe. A na-ewere ya dịka iwe. Ọzọkwa, igwu mmiri naanị n'ụsọ osimiri ọha na eze nwere ike ime ka ị hụ ihe ize ndụ.
Soro ndị ọrụ UAE rụọ ọrụ mgbe ị matachara ihe ndị a!
Otu esi eme ka nyochaa ajụjụ na UAE
UAE juputara n'oru uzo oru n'uzo di iche iche. Otú ọ dị, ọ bụghị onye ọ bụla nwere ike ịrụ ọrụ na mba Arabic, ọ bụ naanị mmadụ ole na ole maara ọkpụkpọ ahụ na ajụjụ ọnụ. Nrụmpụ na-arịwanye elu nke ọrụ na UAE na-eme ka nyochaa dị mkpa karịa ịbalite ọrụ. Ọ bụ usoro dị mkpa nke nyocha ọrụ; ị ghaghị ịchọpụta ihe ndị dị mkpa na ihe ndị a chọrọ n'aka ndị ọrụ na ịkpa àgwà n'ụzọ na-amasị ubi gị. Ọ bụ ezie na asọmpi na-eme ka ọ sie ike ịdata ọrụ, ọ na-enyekwa ndị nwere ihe ọmụma ohere iji mee ka onye were ọrụ kwenye ngwa ngwa.
Otu esi ede ede ma gosi usoro mbu gi bu ihe di mkpa. Ma nke ahụ bụ maka ndị na-edecha akwụkwọ, ihe kachasị mkpa bụ ajụjụ ọnụ. Nke a bụ mgbe ị ghaghị inye ihe kachasị mma iji kwenye onye ọrụ. Ọ bụ ohere gị iji gosi na ihe ị kwupụtara na CV na-eme.
Ịga ajụjụ ọnụ gụnyere ihe kariri ịchọta ajụjụ ndị a ga-enyocha ajụjụ ọnụ. N'ụzọ doro anya, ị ghaghị ịmatakwu akụkọ ihe mere eme na usoro nke ụlọ ọrụ ị na-etinye. Ọ na-egosi mmasị na nkwa maka azụmahịa ụlọ ọrụ. Ọtụtụ ndị na-achọ ọrụ na-atụle akụkụ dị mkpa nke ajụjụ ọnụ, nkwurịta okwu; ọ na-echekarị maka naanị ịza ajụjụ.
N'ajụjụ ọnụ ga-abụ ụzọ abụọ; kwesịrị ikwurịta okwu n'etiti onye nyocha na onye na-achọ ọrụ. N'eziokwu, ị kwesịrị ịjụ ajụjụ iji nyere gị aka ime mkpebi ziri ezi. Ọ bụ ezie na onye ọ bụla na-echegbu onwe ya tupu mgbe ahụ, n'oge, yana ajụjụ ọnụ, nkwadebe zuru oke ga-enyere gị aka ịnọgide na-enwe obi ike ma nweta ọrụ ahụ
Nke a bụ aro ole na ole iji nyere gị aka site na usoro ahụ:
Yiri uwe kwesịrị ekwesị
Ihe mgbakwasa nwere ihe ọ bụla iji mee ya na nke mbụ, nke na-emetụta echiche nke onye na-agba ajụjụ ọnụ. Dịka, a na-agwa ndị mmadụ ka ha na-eyi ahụ. Ụmụ nwanyị na-eyi akwa uwe na-enweghị atụ ma nwee obi ike mgbe ụmụ nwoke na-eyi uwe ntanetị. Nke a dị mkpa ma ọ bụ naanị ihe ndabere maka ịmasị onye nyocha. Ị ga-agabiga ihe ejiji; mara ihe ma chọpụta koodu uwe ejiji nke ụlọ ọrụ ahụ. Ndị na-arụ ọrụ dị iche iche na-achọ ụdị uwe.
Omenala dị mkpa maka ndị nọ na UAE. Ihe mgbakwasa bụ ihe dị mkpa nke ọdịbendị; nke a ga-abụ mmalite gị iji mee ka ị ghọta ihe mbụ. Chọpụta ụda otu nzukọ na-eyi n'ụzọ kwesịrị ekwesị. Onye ọrụ ahụ nwere ike inweta mmasị na gị naanị n'ihi na ị na-eji ejiji dị ka ha na-atụ anya ya.
Jụọ onwe gị ajụjụ tupu ị nyocha
Ọtụtụ ndị mmadụ nọ na-enwe nchegbu maka ụdị ajụjụ ndị nwere ike ịbata na nyocha. Ọ bụ nchegbu nkịtị; ịchọta azịza ziri ezi dịka onye ọ bụla na-atụ anya ya ga-atụle. Otu ajụjụ gbara ajụjụ site n'aka ndị na-agba ajụjụ ọnụ bụ ihe na-akwali gị otu mpaghara. Oge nlebara anya dị iche iche dị mkpa. Ịkwesiri ịdị na-ekwenye n'aka onye were gị ọrụ mgbe nile n'ihi na ndị ọrụ kachasị elu na-atụ gị nyocha. Kwadebe.
Ọzọkwa, nyochaa ike gị, adịghị ike, ohere, na egwu ndị dabeere na ụkpụrụ ụlọ ọrụ. Ị ga-enwe oge dị mfe iji zaa ajụjụ ọnụ ajụjụ dịka onye nyocha ahụ chọrọ ka ọ bụrụ ohere dị elu nke inweta ọrụ. Ị ga-ama ụdị onye ọrụ nke kwekọrọ na nkà gị. Ịnye onwe gị n'aka onye ọrụ aka gị na-amụba ohere ịnweta ọrụ na UAE.
Mbụ, ị ga-eburu n'uche na ị nọ n'ala Arabic ma chọpụta ihe ndị bụ isi nke ihe ha chere na ọ bụ ihe ziri ezi na ihe ọjọọ. Cheta na mkparita uka bu ihe gbasara ime ihe. N'ezie, ị ghaghị ikwenye na onye ọrụ ahụ site na iru eru gị na akwụkwọ nchechi tupu ha edebanye aha gị maka ajụjụ ọnụ. Otú ọ dị, ọ dị ha mkpa ijide n'aka àgwà na akparamàgwà nke onye ọ bụla tupu ịkwụ ụgwọ. Nke a bụ ihe mere ajụjụ ọnụ ji bụrụ usoro ikpeazụ na dị mkpa nke usoro nchịkọta.
Ndị ọzọ karịrị ịwụnye n'ụzọ kwesịrị ekwesị, nhọrọ dị mma nke okwu, ma na-eche ihu ihu ọma, ị kwesịrị ịbanye na omenala Arabic. Ọ bụ ezie na nkwanye aka bụ igosipụta obiọma, ọ bụ ihe na-ekwesịghị ekwesị inye ndị na-enwe mmekọahụ aka. Ị ga - aka mma ka ichere ha ka ha malite ime aka. Ọzọkwa, omenala Arabic na-ele ya anya ọjọọ ma ọ bụrụ na ị jụ ịṅụ mmanya. Mgbe e nyere gị kọfị, tii, ma ọ bụ iko mmiri, jide n'aka na ị ga-ewere ya.
Atụmatụ ndị a na-ahụkarị na-agụnye ichere onye na-agba ajụjụ ọnụ iji nye oche, na-ele anya na otu panel, ma nọgide na-enwe ụda olu mgbe ị na-aza ajụjụ. Adịla na oche gị n'oge nyochaa, nọdụ ala. Zere ịkpa ike dị ka ụkwụ na aka n'oge mkparịta ụka. Dịka na n'akụkụ niile nke ụwa, anaghị eji ekwentị mkpanaaka mgbe ị na-agba ajụjụ ọnụ na UAE, a na-ewere ya dị ka nkwanye ùgwù.
Mụọ nkwekọrịta ego
N'ụzọ doro anya, ọ bụghị naanị gị nọ na eriri ọrụ. Eleghị anya, naanị otu akụkụ ahụ nke na - eme ka ị dị iche site n'aka ndị ọzọ ga - akwụ ụgwọ bụ ụgwọ. Mgbe ị kwesịrị ịtụle ahụmịhe na mkpa gị n'ịkọ ụgwọ, ị kwesịrị ịma ihe ị ga-eme ka ị ghara ikwu karịa ọnụahịa ahịa.
Ịga ajụjụ ọnụ dabeere na nchọpụta kwesịrị ekwesị.
Na-arụ ọrụ dị ka Onye Ozizi na UAE
Ịrụ ọrụ na UAE bụ ahụmahụ na-akpali akpali ma ọ bụrụ na ịchọrọ ịrụ ọrụ n'ụlọ. Enwere ọtụtụ ohere ọrụ ma nye ndị ala ọzọ na UAE ma ọ bụrụ na ị dị njikere ịnwe akwụkwọ iji ruo eru. Ọtụtụ ndị Briten, ndị America, ndị Canada, na ndị China n'etiti ndị ọzọ, enwewo ọganihu n'inweta ọrụ n'enweghị ihe mgbochi ma ọ bụ nsogbu. N'ihi atumatu na ụkpụrụ, enwere ụgwọ dị mma.
Ịkụzi ọrụ bụ otu n'ime ndị ọrụ kachasị ọrụ ndị mba ọzọ na-eburu na UAE. Ihe kpatara ya bụ gọọmentị dị na Emirates ji eme mgbalị ya iji kwalite usoro agụmakwụkwọ Emirati. Iwulite ndi mmadu nwere ihe omumu na mba Arab bu uzo kacha mma iji kwadebe umu ozo di n'ihu na ihe o choro maka onodu aku na uba. Ụkpụrụ dị mkpa nke na-amata mba ahụ na-achọ ịkwado ụkpụrụ mmadụ na itinye aka na professionalism na nghọta. Iji mee nke a, ịchọta onye ọrụ a pụrụ ịdabere na ya na-arụ akụkụ dị mkpa nke usoro ahụ iji nweta ihe mgbaru ọsọ ahụ
Ụlọ akwụkwọ gọọmentị
Ụlọ akwụkwọ gọọmentị bụ ebe ha ga-esi tinye usoro ahụ n'ọrụ. N'iburu nke a n'uche, oru ahụ dị elu na-achọ. Gọọmenti dị njikere itinye ego na ndị ọrụ mba ọzọ iji mee ka usoro mmụta ya dịkwuo elu. Ụlọ akwụkwọ ọha na eze enweta ego buru ibu ma nyefee akụkụ dị ukwuu nke mmefu ego nke obodo iji nye ụmụaka Emirati ohere iji nweta ụlọ akwụkwọ kacha mma.
A haziri usoro ihe a iji mepụta usoro ohuru iji kwadebe ụmụ maka ọha mmadụ nke oge ochie. Iji mee nke a, Ministrị nke Mmụta amụbawo mmesi ike ya na mmemme onye nkụzi Bekee. A na-akụziri Bekee na ọkwa niile na usoro. Ọ bụ otu n'ime isiokwu ndị metụtara isiokwu mgbakọ na mwepụ na Sayensị. Ndị ọzọ nọ na ndepụta ahụ bụ ihe ọmụma bara uru dị ka Business na Entrepreneurship, Nkà Mmụta Ahụ, Ụdị Ndụ, Kọmputa Sayensị, na Nkà Ihe Echiche. A na-enye ha n'etiti Grades 10-12 ma meeworị mmetụta dị ukwuu n'ahụ ndị bi na ya.
N'adịghị ka azụ n'ụlọ, nkuzi na UAE bụ ohere na-enye ohere ichere anya taa. E nwere ọtụtụ ihe ị ga-amụta ma nweta site n'ịrụ ọrụ na UAE na ị gaghị echefu ma ọ bụrụ na ị na-eche na ị bi ebe a dịka onye ọpụpụ.
Ihe ndi nkuzi
Ihe ndị a chọrọ maka ndị nkuzi na-agbanwe dị ka ọnọdụ dị na ajụjụ. A na-agbanwekwa ha mgbe niile n'ihi ya. Otú ọ dị, ihe niile achọrọ dị ka ụkpụrụ nduzi bụ;
Azu Bachelor na Early Education or certificate related from a recognized institution
Enwere ikike ikikere nkuzi
Afọ 2 nke ahụmahụ ọhụụ gara aga na Ngalaba Kindergarten ma ọ bụ Early Years Field tupu ngwa ahụ
Maka ọrụ nkuzi na Bekee, ị ga-achọ ihe ndị na-esonụ
Akwụkwọ ikikere CELTA ma ọ bụ Ịkụzi ikike / ikikere
Afọ 2 nke ahụmahụ nkuzi gara aga
Nkwadebe maka ọrụ na UAE chọrọ akwụkwọ zuru ezu dịka iwu nke ala ahụ dị. Ịkwado akwụkwọ gị bụ nzọụkwụ dị mkpa dị mkpa maka usoro a. Ọrụ visa bụ tiketi gị iji nweta ikike na ohere ma ọ bụ ọnọdụ ọrụ. Nke a bụ ihe dị oké mkpa maka ndị mba ọzọ ịchọta ọrụ n'ebe a. Ị nwere ike ịbanye na Emirates na onye ọbịa ma ọ bụ visa njem nleta ma ị ga-achọ ịnyefee akwụkwọ visa gị mgbe ịchọtara ọrụ. Ọtụtụ ndị mba ọzọ na Dubai agaghị achọ inweta visa tupu ha abịa. I kwesịkwara ịkpachara anya na obodo gị si na-arụ ọrụ n'ime mkpebi nke mmegha ahụ. Dịka ọmụmaatụ, ụfọdụ ụmụ amaala nwere ikikere ijide visa ha na UAE maka ụbọchị 90 gụnyere ndị America, ndị Britain, ndị Canada, na ndị China.
Ịrụ ọrụ n'enweghị ọrụ visa kwesịrị ekwesị abụghị ihe amamihe dị na ya n'ihi na ọ dị ize ndụ. Ọ bụrụ na ejidere gị, ị ga-enwe nsogbu maka ịghara inweta ya. Ma ọ bụghị ya, a ga-achọ ka ị hapụ obodo ahụ mgbe ị gachara oge visa gị. O doro anya, mgbe ịchọtara ọrụ, onye ọrụ gị ga-ebido usoro visa maka gị ka i wee ghara ichegbu onwe ya banyere ya. Ụlọ ọrụ ga-ewepụ usoro ahụ. Ihe niile ị ga - eme bụ ịdefe akwụkwọ akwụkwọ gị dị ka nọmba paspọtụ gị iji malite usoro. Nke a bụ, Otú ọ dị, ọ bụghị ihe niile ọ chọrọ iji ruo eruo maka visa ọrụ.
Ememe ochichi nke Emirati na ime ka ndi mmadu nwekwuo mmetuta emeela ka mmeghe nke nkuzi oru. Nke a bụ ohere dị ukwuu maka ndị ala ọzọ na-achọ ọrụ n'ihi mgbakọ na asọmpi n'ụlọ. Ọ bụrụ na ịchọrọ ime ihe kachasị mma ná ndụ gị dị ka onye na-abanye na UAE, ị nwekwara ohere dị mma iji nweta ego na nke a. N'agbanyeghị ihe mere ị ga-eji banye na UAE, ị ga-erite uru site na ego ndị na-abịa na ya. Dịka ọmụmaatụ, ị nwere ike ịmegharị ezinụlọ gị maka ezumike iji nwee obi ụtọ ịma mma mara mma nke mba Arabia na-arịwanye elu.
6 Ihe dị mkpa iji mara mgbe ị na-arụ ọrụ na UAE
Echiche nke ịrụ ọrụ site na obodo gị nwere ike ịtụ egwu. Otú ọ dị, UAE na-enye ahụmahụ kachasị mma maka ndị na-ere ahịa. Na agbanyeghị n'ọhịa nke ọkachamara gị, enwere ọtụtụ ohere na mba Arabic. Nke a apụtaghị na ị ga-enweta ọrụ ozugbo; ị ghaghị ịchọta banyere ndị ọrụ kwesịrị ekwesị ma nyochaa nyocha maka ọrụ iji nweta ọrụ na-akwụ ụgwọ na UAE. Otú ọ dị, nkwụsị na mba dịka onye ọrụ oge nile na-ewe karịa ụgwọ ọrụ na nchekwa ọrụ.
I kwesiri ịma ihe gbasara atumatu ulo oru na ihe kachasi ike gi. Ihe ndị ọzọ dị mkpa ị kwesịrị ịlele n'oge awa ọrụ, oge ezumike, na ọnụego ịkwụ ụgwọ. Ma ị nọworị na mba ahụ ma ọ bụ na ị na-eme atụmatụ ịbanye na ọrụ nchọta ọrụ, ọ dị mkpa ịkọba ihe ndị na-esonụ.
Iwu UAE na-achọ ka ndị ọrụ kwụọ ụgwọ maka ụgwọ niile metụtara njem na ịbanye. A na-akpọ gị òkù maka ajụjụ ọnụ, ị gaghị etinye ego maka ụgwọ ụgbọelu ụgbọelu na ịhazi ntinye akwụkwọ ntinye aka na UAE. Ọ bụ ọrụ onye ọrụ ahụ. A ga-akwụ ụgwọ ọ bụla maka ụlọ ọrụ nchịkwa ga-akwụ ụgwọ site n'aka onye ọrụ gị. Ọtụtụ ndị na-amaghị na ha amaghị iwu a, nke a weere uru nke ndị ọrụ. Jide n'aka na gọọmenti nke obodo gị kwadoro ọrụ ụlọ ọrụ na-aza ajụjụ iji zere ihe ọ bụla ma ọ bụ ịdaba na ndị mmadụ.
Ị kwesịrị ịmalite ịma ihe niile gbasara ọnọdụ ọrụ. Wepụta oge iji gụọ ọ bụla mmewere na nkwekọrịta ma jide n'aka na ya na ọrụ ọrụ. Jụọ onye ọrụ gị ma ọ bụ ọrụ gị n'ụlọnga ihe ọ bụla doro anya ma ọ bụ amaghị. A ghaghị ime nke a tupu ị na-eme atụmatụ ime njem na UAE, ghọta ihe niile.
Lelee aha ọrụ, ụgwọ ọrụ, na ọrụ dị mkpa dị ka nkọwa nke ọrụ. I kwesiri inwe obi iru ala nke obula na ha kwesiri igbado gi. Ị nwere onwe ịjụ ma ọ bụrụ na ị maghị ọrụ ụfọdụ, echela na onye ọrụ ga-enye ọzụzụ. Ịbanye pụtara na ị kwenyere na ike nke ihe ọ bụla na ọrụ nkwekọrịta.
Cross na-ele ọrụ ụlọ ọrụ ahụ anya site na ọrụ mbụ ha nyere, ha kwesịrị ịgbasa.
Mgbe ịchọtara ọrụ na ọrụ nkwekọrịta zuru oke, mee ọtụtụ akwụkwọ nke akwụkwọ. Asambodo gị na akwụkwọ ndị ọzọ dị mkpa gụnyere mkpuchi kwesịrị ịbụ na mbipụta. Ọ bụ ịkpachara anya iji zere ọnwụ ma ọ bụ mmebi. Akwụkwọ niile metụtara ọrụ kwesịrị ịbụ na ọtụtụ akwụkwọ. Ọbụna mgbe ị natara ọrụ ahụ, debe akwụkwọ ndị ahụ. Ị maghị!
Mgbe ị rutere UAE, ọ bụ ọrụ onye ọrụ gị na-ahazi gị na mba ahụ ma jide n'aka na ị ga-edozi. A ga-eji onye ọrụ gị kwado ụgwọ ọrụ ọ bụla na mbata na ikike ndị ọrụ. N'ọtụtụ ọnọdụ, a ga-achọ ka ị gaa maka nyocha ahụike, na-akwụ ụgwọ ụgwọ onye ọrụ. Enwere ikike ịnweta ikike bụkwa akụkụ nke ọrụ onye ọrụ ahụ. Nke a dị ka iwu ụlọ ọrụ UAE ma ọ bụrụ na ọ bụrụ na ị nwere obi abụọ, jụọ ụlọ ọrụ na-ahụ maka ọrụ ma ọ bụ onye ọrụ tupu ị gaa.
Debe akwụkwọ gị
Maka ịkwụ ụgwọ ma ọ bụ na nkwari akụ ma ọ bụ ịzụta ihe, a ga-edebe ụgwọ akwụkwọ. Iwu UAE kwadoro ma megidere onu ahia na nchegbu ndi ozo. Ọzọkwa, ọ nwere ike inyere gị aka igosi onye ọrụ gọọmenti ọrụ gị na ịza ajụjụ ya. E wezụga ọrụ na-achọ ihe omume, ọ bụ ezigbo omume maka ngosipụta onwe onye. Nọgide na-echekwa akwụkwọ iji gosi ego gị.
Ọzọkwa, debe akwụkwọ gị onwe gị. Ị maghị mgbe iwu ga-achọ ka ịmepụta ha, ebe ị na-atụle na ị bụ onye ọ bụla. N'ezie, mgbe ị bịarutere, onye ọrụ gị na ndị ọzọ na-achịkwa iwu ga-ekwesịrị iji gosi na ị maara na ị nwere ike ịdabere na ịrịọ maka paspọtụ, visa, na ikike ọrụ. A na-achọkwa akwụkwọ ahụ mgbe ị na-etinye akwụkwọ ikike nke onye ọrụ gị maka akwụkwọ ikike.
Jide n'aka na ị na-ewere akwụkwọ na akwụkwọ ikike gị. I kwesịrị ịnweta akwụkwọ n'oge niile.
Mgbe ị rutere UAE, onye ọrụ ahụ ga-elekọta ọrụ niile ederede. N'ime otu izu, onye ọrụ ga-ewetara gị ọrụ nkwekọrịta zuru oke. Nkwekọrịta ahụ kwesịrị ịbụ otu ihe ahụ dị ka onyinye mbu. N'ọnọdụ ụfọdụ, enwere ike ịbụ ezigbo ọrụ na onye ọrụ nwere ihe ndị ọzọ na-adịghị mma. Echerela izu ọzọ iji soro onye ọrụ ahụ ma ọ bụrụ na ị na-enwe mmebi iwu ma ọ bụ emeghị ihe n'eziokwu na ọrụ. Gwa okwu ahụ na Ụlọ Ọrụ Ọrụ Ọrụ maka ngwa ngwa na enyemaka. Ọzọkwa, ị ga-akọrọ onye ọrụ gị maọbụrụ na ha anaghị akwụ ụgwọ gị ụgwọ zuru oke ma ọ bụ oge dị ka ụbọchị na ego a kwadoro na ọrụ nkwekọrịta.
E wezụga atụmanya ọrụ, ị kwesịrị ịmara ikike gị dị ka iwu UAE.
Ihe niile ị chọrọ ịma banyere ịrụ ọrụ na UAE
Ọ bụrụ na ị na-eme atụmatụ ịrụ ọrụ na UAE, enwere ọtụtụ ihe ị ga-eche tupu ịkwaga na Ọzara Arab ama ama. Ọ bụrụ na ha si na UK, USA Canada, na mba ndị ọzọ nwere visas wepụrụ, ị kwụ ọtọ iji nweta ọrụ. Ọtụtụ ndị gụsịrị akwụkwọ na mba ndị a na-ahọrọ iso ụlọ ọrụ mba dị iche iche, nke nwere ngalaba n'ụlọ. Nke a bụ ohere kachasị mma ha nwere iji nweta ọrụ na ọfịs. Ọ bụkwa ohere iji rite uru na ụtụ ego anaghị akwụ ụtụ iji belata ego ụgbụ.
Nke mbụ, ka anyị nyochaa usoro nke inweta ọrụ na UAE
Inweta Job n'ime UAE
Mba a Arab a ma ama nwere otutu ihe inye ndi njem nleta na ndi nleta ndi choro ibi n'ebe a. Ọ bụ nnukwu ọzara na ebe pụrụ iche na-eme ka ndabere nke imepe emepe ngwa ngwa mepere emepe mepere emepe nke mepere emepe na-emepụta ihe na-eme ugbu a. Nke a pụtakwara na e nwere oké ọchịchọ maka ọrụ ndị nwere nkà. Dịka ọmụmaatụ, Dubai na-enye ọtụtụ ohere maka ndị ọrụ ala ọzọ na-achọ ịkwalite akụ na ụba ha nke mpaghara ahụ. Ihe a na-enye aka na-enyere mba ahụ aka inweta uru na ihe onwunwe mgbe ị nwetara ego a chọrọ.
Ọ bụ ezie na UAE bụ otu n'ime mba kachasị emesapụ aka ị ga - achọta, enwere ọtụtụ ihe ị ga - amụta. Ọ dị mkpa ka ị ghọta ụkpụrụ omenala na nke okpukpe n'ihi na a na-ewere ha nke ọma n'ebe a. Okpukpe na omenala ha na-ejikọta na nkọwa nke ndụ kwa ụbọchị. Ịmụta omume ndị mmadụ na ụzọ niile nke ime ihe ga-enyere gị aka ịnagide ngwa ngwa.
Banyere ọrụ; ọtụtụ ndị ọpụpụ na-arụ ọrụ na nkwekọrịta nkwekọrịta n'okpuru nkwado. Nke kachasị mkpa, ego a na-akwụ ụgwọ na-akwụ ụgwọ anaghị akwụ ụgwọ. Enwere kwa ego ịkwụ ụgwọ ọrụ mgbe njedebe nke nkwekọrịta ahụ.
Ebee ka Ije Ozi na UAE
Ọ bụrụ na ị na-eche ebe ị ga-arụ ọrụ na UAE, ịkwesịrị ịme obere nyocha. Tụlee eziokwu na nnukwu ụlọ ọrụ na UAE emeela ka ọtụtụ ndị ọrụ nwere ọrụ site na ụwa niile. Ihe ndị sitere na mmanụ ala emeela ka akụ na ụba mba nwee ike ịmịpụta uto kasịnụ. Nke a uto agbanweela mpaghara ahụ ka ọ bụrụ ebe ndị njem na - agagharị agagharị n'ụwa niile. Ọ dịkwa njikere ịbụ ebe azụmahịa na-enye ọ andụ na ewu ewu maka ọdịnihu. Mmeghe nke World World Cup na-egosipụtakwa uru mpaghara dị n'akụkụ ụwa ndị ọzọ.
Taa, nke a bụ ụlọ ahịa ahia ahia nke Osimiri Persian ma na-edu ụwa n'ime mbubata na mbupụ. Dịka ọmụmaatụ, ọtụtụ n'ime nri a na-eri ebe a dị mkpa. Nke a pụtara nnukwu azụmahịa maka ụlọ ọrụ ndị na-ebu nri ngwa ngwa dị iche iche nhọrọ ndị ọzọ.
Akuko gbasara ego ohuru gosiputara ezigbo ndozi kariri mgbe osiso nke 2008. O mere ka ahịa dị iche iche, bụ nke sitere na ọnụahịa mmanụ na ala ụlọ. Ọnụ ahịa mmanụ ndị ahụ na-agbanwe agbanwe ghọrọ oku a na-eteta ka ọ gbasaa na mpaghara ndị ọzọ iji mee ka mpaghara akụ na-agbada kwụsị. Kinglọ akụ na ego, azụmaahịa na azụmahịa, yana njem nlegharị anya na ntụrụndụ ghọrọ usoro ọhụụ na Expo 2020 UAE.
A maara Dubai maka ọnụ ahịa okomoko na mgbanwe ọ bụla n'ime usoro a na-emetụta UAE n'ụzọ dị ukwuu. Inye ego di iche iche nke uba di iche iche abughi uzo ozo nke nsogbu. E wezụga mmanụ ụlọ mmanụ na mmanụ ụlọ, ị nwekwara ohere ịkụ azụ, ihe owuwu ụlọ, aluminom, ụlọ ọrụ azụmahịa, ụlọ ọrụ, ciment, na ụlọ ọrụ fatịlaịza.
Na-achọ maka ọrụ na UAE
Middle East na-enye nnukwu ọrụ na ohere iji tinye ihe ọmụma gị na nkà gị. Ọ bụrụ na ị bụ onye gụsịrị akwụkwọ ma ọ bụ ọkwa ọ bụla nke agụmakwụkwọ na ọzụzụ, ị ga-erite uru site na ohere na UAE. Dịka ọmụmaatụ, Dubai, na-enye ọtụtụ ndị mba ọzọ aka ịmalite ọrụ iji gbalite nkwalite ntụrụndụ ha. Nke a pụtara na ndị mba ọzọ nwere ezigbo ohere ịrụ ọrụ ebe a na ndị ọzọ UAE n'enweghị ọtụtụ nsogbu. A gaghị enwe asọmpi maka ọrụ, ebe ọ na-alaghachi n'ụlọ, echegbula onwe gị banyere ogologo oge nke ndị ntinye akwụkwọ ma rụọ ọrụ nke ukwuu. Otu n'ime ọrụ kachasị mma na nkà na-achọ bụ; nchịkọta akụkọ, mmekọrịta ụwa, mmepụta ihe algorithm, ntinye data, iwu ọha na eze, ụlọ ọrụ weebụ, SEO / SEM ahịa, na UI designs
Ọ bụrụ na ịchọrọ ịrụ ọrụ na UAE; e nwere ihe ole na ole ị chọrọ ịtụle. Ịbanye n'ime ọrụ ahịa Dubai chọrọ ịma ihe gbasara mpaghara a ma soro akụ na ụba. Otu n'ime okwu kachasị mkpa gụnyere; visa, nkwado, na ebe ị ga-achọ ntule ajụjụ ọnụ. Lee ihe ndị ị ga-achọ tupu i nweta ọrụ nrọ gị na United Arab Emirates.
Nweta Visa Ezigbo
Ịkwadebe maka ọrụ na UAE chọrọ akwụkwọ kwesịrị ekwesị. Ịkwado akwụkwọ gị bụ nzọụkwụ dị mkpa dị mkpa maka usoro a. Ọrụ visa bụ tiketi gị iji nweta ikike na ohere ma ọ bụ ọnọdụ ọrụ. Nke a bụ ihe dị oké mkpa maka ndị mba ọzọ ịchọta ọrụ n'ebe a. Ị nwere ike ịbanye na Emirates na onye ọbịa ma ọ bụ visa njem nleta ma ị ga-achọ ịnyefee akwụkwọ visa gị mgbe ịchọtara ọrụ. Ọtụtụ ndị mba ọzọ na Dubai agaghị achọ inweta visa tupu ha abịa. I kwesịkwara ịkpachara anya na obodo gị si na-arụ ọrụ n'ime mkpebi nke mmegha ahụ. Dịka ọmụmaatụ, ụfọdụ ụmụ amaala nwere ikikere iji jigide visa ha na UAE maka ụbọchị 90 gụnyere;
Switzerland, Sweden, Spain, Slovenia, Slovakia, Romania, Portugal, Poland, Norway, Malta, Luxembourg, Lithuania, Liechtenstein, Latvia, Italy, Iceland, Hungary, Holland, Greece, Germany, France, Finland, Estonia, Denmark, Czech Republic, Saịprọs, Croatia, Bulgaria, Belgium, na Austria. Ndị ọzọ anaghị achọ visa maka ụbọchị 30. Ha gụnyere; Ndị Canada, ndị China, ndị Australia, ndị Japan, ndị Russia, ndị Irish, ndị Britain na ndị America.
Ịrụ ọrụ n'enweghị ọrụ visa kwesịrị ekwesị dị ize ndụ. Ọ bụrụ na ejidere gị, ị ga-enwe nsogbu maka ịghara inweta ya. Ma ọ bụghị ya, a ga-achọ ka ị hapụ obodo ahụ mgbe ị gachara oge visa gị. O doro anya, mgbe ịchọtara ọrụ, onye ọrụ gị ga-ebido usoro visa maka gị ka i wee ghara ichegbu onwe ya banyere ya. Ụlọ ọrụ ga-ewepụ usoro ahụ. Ihe niile ị ga - eme bụ ịdefe akwụkwọ akwụkwọ gị dị ka nọmba paspọtụ gị iji malite usoro. Nke a bụ, Otú ọ dị, ọ bụghị ihe niile ọ chọrọ iji ruo eruo maka visa ọrụ.
Kaadị Health na Ọrụ
N'oge nhazi nke visa ọrụ gị, a ga-achọ ka itinye akwụkwọ ndekọ ọgwụ gị. Akwụkwọ ahụike ndị a ga-esoro ya na paspọtụ paspọtụ, foto, akwụkwọ ozi a na-enye ọrụ na akwụkwọ ikike visa. Ngalaba Ahụike na Ọrụ Ahụike chọrọ ị ada ntị na ntinye uche ndị a tupu ịmalite ịrụ ọrụ na visa ọrụ gị. A ga-achọ ka ị were nnwale ọbara dịka ihe achọrọ site na Ngalaba Ahụike na Ọrụ Ahụike. Nyocha ahụ kwesịrị iwepụ ọrịa ndị dị ka HIV / AIDs, Hepatitis C, na ụkwara nta. Ka ọ dị ugbu a, ọ nweghị onye mba ọzọ na-ebu ọrịa ndị a na-ahapụ ibi ebe a. Ọ bụ naanị mgbe ịgafe ule ndị ahụ ka ị ga - enweta kaadị ahụike, nke bụ mmanye maka ndị ọrụ si mba ọzọ na United Arab Emirates niile.
Kaadị ọrụ ga-achọ foto paspọtụ, nkwekọrịta ọrụ, akwụkwọ visa, akwụkwọ ndekọ ahụike, na nkọwa ndị ọrụ. Ozi ndị a ga-amata ma kwadoro ya.
Isi ụlọ ọrụ Dubai nke General Residency na Foreign Affairs kwesịrị ịnweta visa obibi gị. Ha choro ka i bia n'ime onwe gi iji mezuo ngwa. Ị ga-edejupụta akwụkwọ ma nye akwụkwọ gị (akwụkwọ ahụike, ikike ntinye, ihe ndekọ ahụike, foto paspọt, kaadị ọrụ na ihe nkwụnye iji gosi na nhazi ọrụ nhazi gị na-aga n'ihu).
N'iji akwụkwọ ndị a na usoro a, ị ga-adị njikere ịrụ ọrụ na Dubai.
Iji nweta echiche sara mbara banyere ụzọ ịchọta ọrụ, jiri jobsntanetị. N'ebe a, ị ga-ekpughere ndị ụlọ ọrụ ahụ na-arụ ọrụ na Dubai na nnukwu ozi zuru ezu. Chọta saịtị ndị a na-ahụkarị na nke a pụrụ ịtụkwasị obi iji zute ọrụ na ọchịchọ na ohere itinye n'ọrụ dị mfe. Thedị ntanetị na-enye gị ohere iji obere akụrụngwa dịka ego na oge n'ihi na ịgaghị akwaga n'ụlọ ọrụ. Ọ kachasị adaba ma rụọ ọrụ nke ọma iji ihe ntanetị ịchọta ndị kọntaktị na ohere ebe a na Dubai. Companieslọ ọrụ ndị ahụ na-eguzosi ike n'ihe site na saịtị ha nke ọma, ha na-ewebata ọtụtụ ndị mba ọzọ.
Mmechi maka Dubai
Dubai bụ otu n'ime ebe kachasị mma iji nweta ọrụ. Mana naanị iji nweta ebe a ga-enwe ọtụtụ mgbalị na nhazi ozi dị mkpa. Ma gị onwe gị dịka onye na-achọ ọrụ, ọ ga-adị gị mkpa ijikwa ọrụ gị na-achọ nke ọma. Ị nwere ike iji ụlọ ọrụ anyị mgbe niile nyere gị aka inweta ọrụ na United Arab Emirates. N'ikwu okwu n'ozuzu, oge bụ isi iji nweta ọrụ na Dubai. N'ihi na, ma ọ bụrụ na ị na-achọ ịkwaga mba ọzọ ị nwere ike ịhọrọ Dubai dịka ebe ị ga-ebi. Echere na ị ga - edebanye CV gị na ebe nrụọrụ weebụ anyị na ndị nnọchianya anyị ga - enyere gị aka inweta ọrụ na Emirates.
Kedu ka anyị ga - esi enyere gị aka ịchọta ọrụ?
Ụlọ ọrụ anyị na-enye ọrụ ntinye aka 100% na nyocha ọrụ gị. N'okpuru ọnọdụ ndị a, anyị nwere olileanya iji nyere gị aka ịchọta ọrụ na Dubai. Ndị otu anyị na-enyere ọtụtụ ndị aka. Site ahia ahịa na Middle East ngalaba. Ruo arụ ọrụ ego na UAE. Ụlọ ọrụ anyị na-enyere ndị na-achọ ọrụ na UAE aka.
Ụlọ ọrụ dị na Dubai na-enyere ndị ọpụpụ na Middle East aka. Site na India gaa Dubai, site Pakistan ruo Abu Dhabi. Anyị nọ ebe a iji tinye gị na United Arab Emirates. Ya mere, ọ bụghị oge gị ma chọta ọrụ na ụlọ ọrụ anyị.
Na-arụ ọrụ na Dubai!
Ugbu a, anyị na-enyere ndị na-ere ọrụ aka maka ọrụ na Dubai
Chọta a Job na Dubai ?. N'ụzọ dị ịtụnanya ka ịchọrọ na ịchọta ọrụ nrọ ahụ.
Nanị kwalite mmalite ma malite ọrụ ọhụrụ na Dubai!
Bulite Na-amalite nke kachasị ọsọ Dubai Company na UAE!
Citylọ ọrụ Dubai City na-enye ezi ugbu a nduzi maka Ọrụ na Dubai. Ndị otu anyị kpebiri ịgbakwunye ozi maka asụsụ ọ bụla maka expats nke Dubai anyị. Yabụ, site na nke a, ị nwere ike nweta ntụzịaka, ndụmọdụ na ọrụ na United Arab Emirates na asụsụ nke gị.